အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ထွန်းသစ်စလူကြီးဘဝတွင်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (၂၀၂၀) - Your Brain On Porn
အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ သို့သော်ယခင်လေ့လာမှုသည်ရွေးချယ်ခြင်းဘက်လိုက်မှုကဲ့သို့သောနည်းစနစ်ဆိုင်ရာပြissueနာကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသောလိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အနောက်နိုင်ငံမဟုတ်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းများသို့မည်သို့ဆက်ဆံနိုင်သည်ကိုအနည်းငယ်သာသိရှိရသေးသည်။
သင်တန်းသားများကိုအလားအလာ longitudinal လေ့လာမှု (ထိုင်ဝမ်လူငယ်စီမံကိန်း) မှစုဆောင်းခဲ့သည်။ အားလုံး7ယောက်ရှိth လေ့လာမှုကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည့်အခါအတန်း (ဆိုလိုသည်မှာအသက် = ၁၃.၃) ဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်းထိတွေ့မှုနှင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးတို့အပါအ ၀ င်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာထိတွေ့မှုကိုလှိုင်း ၂ (၈) တွင်တိုင်းတာသည်။th တန်း) ။ အန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူများကိုလှိုင်း ၈ (အလယ်အသက် - ၂၀.၃) နှင့် ၁၀ - (အသက် - ၂၄.၃) ကိုတိုင်းတာသည်။ အနည်းဆုံးနှစ်ထပ်ကိန်းကိုဆုတ်ယုတ်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ပါဝင်သူ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပါဝင်မှုကို ၈ ဦး ဖြင့်ပြသခဲ့သည်th ပျမ်းမျှတစ်ပုံစံတည်းမှတန်း။ လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကအစောပိုင်းလိင်ဆက်ဆံမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း၊ မလုံခြုံသောလိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံဖက်များ (အားလုံး - p <.05) ကိုခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင်မီဒီယာပုံစံများနှင့်ပိုမိုထိတွေ့ခြင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေသည်။ သို့သော်လိင်ဆိုင်ရာစောစီးစွာပွဲ ဦး ထွက်သက်ရောက်မှုမှာကျား၊
လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှပေါ်ထွက်လာသည့်လူကြီးဘဝတွင်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူများနှင့်ထိရောက်သောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ ဤကဲ့သို့သောကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသိရှိထားခြင်းကအစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုအစီအစဉ်များကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။ ထင်ရှားသောနည်းလမ်းတစ်ခုမှာမီဒီယာစာတတ်မြောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအစောပိုင်းပညာရေးဖြစ်သည်။ သမားတော်များကိုယ်တိုင်က၎င်းအကြောင်းအရာကိုအစပြုရန်အကျွမ်းတဝင်ရှိရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
ကိုးကား: Lin WH, Liu CH, Yi CC (2020) အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့မှုသည်ထွန်းသစ်စလူကြီးဘဝတွင်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ PLoS ONE 15 (4): e0230242 ။ https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230242
အယ်ဒီတာ: Luis M. Miller၊ စပိန်အမျိုးသားသုတေသနကောင်စီ၊ စပိန်
Received: ဇွန်လ 24, 2019; လက်ခံခဲ့သည်: ဖေဖော်ဝါရီလ 26, 2020; Published: ဧပြီလ 10, 2020
မူပိုင်: © 2020 Lin et al ။ ၎င်းသည်စည်းကမ်းချက်များအောက်တွင်ဖြန့်ဝေထားသည့်ပွင့်လင်းမြင်သာသောဆောင်းပါးဖြစ်သည် ကို Creative Commons Attribution လိုင်စင်, အရာမရှိသောအသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြု, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, မည်သည့်အလတ်စားအတွက်မျိုးပွား, မူရင်းစာရေးသူနှင့်အရင်းအမြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်ဖြစ်သည်။
ဒေတာကိုရရှိနိုင်: လက်ရှိလေ့လာနေစဉ်အတွင်းထုတ်လုပ်သောနှင့်ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည် Survey Research Data Archive တွင်ရရှိနိုင်သည်။https://srda.sinica.edu.tw/) ။ TYP အချက်အလက်စာရင်းများသည်အများပြည်သူအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးထိုင်ဝမ်ရှိ Academia Sinica ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သုတေသနရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။http://www.typ.sinica.edu.tw).
ရန်ပုံငွေရှာခြင်း: ဤသုတေသနကိုထိုင်ဝမ်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာနမှထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည် (MOST 107-2410-H-010-001 မှဝမ်ဆလင်းသို့) အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်လက်ရေးစာမူကိုပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သူများသည်အခန်းကဏ္hadတွင်မရှိခဲ့ပါ။
အတိုကောက်: ATE ပျမ်းမျှကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှု; အိပ်ချ်အိုင်ဗွီ / အေအိုင်ဒီအက်စ်၊ လူ့ immunodeficiency virus / ရရှိသော immunodeficiency syndrome ရောဂါ၊ IV, ဆာပ Variable; OLS, သာမန်အနည်းဆုံးရင်ပြင်များ၊ PDS, အပျိုဖော်ဝင်ဖွံ့ဖြိုးရေးစကေး; RCT, ထိန်းချုပ်ရေးစမ်းသပ် Randomize; SLS နှစ်ခုအဆင့်အနည်းဆုံးရင်ပြင်; လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ၊ TYP, ထိုင်ဝမ်လူငယ်စီမံကိန်း
နိဒါန်းအစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်၊ အန္တရာယ်ကင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှု (ဥပမာ - ကိုက်ညီမှုမရှိသောကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း) နှင့်လိင်ဆက်ဆံဖက်များ (ဥပမာ - မိတ်ဖက်ပြောင်းလဲမှုနှုန်း) အပါအ ၀ င်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ။1] သူတို့၏ရေရှည်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိအာရုံစိုက်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။2] အထူးသဖြင့်လိင်နှင့်သက်ဆိုင်သောလိင်ဆက်ဆံမှုမှကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှုများ (STIs) ကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော။3] အခြားရောဂါများ  မရည်ရွယ်ဘဲ / ဆယ်ကျော်သက်ကိုယ်ဝန် [3-5] နှင့်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု  ။ ဆယ်ကျော်သက်များသည်အထူးသဖြင့်အမေရိကန်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများစွာရှိအခြား STIs (ဥပမာ gonorrhea) တွင်အများဆုံးဖြစ်ပွားသောရောဂါများတွင်ပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။7] နှင့်ထိုင်ဝမ်  နှင့်ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြား (ဥပမာအာရှနှင့်အာဖရိက) တွင်သူတို့သည်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီ / အေအိုင်ဒီအက်စ်ကူးစက်မှုကိုခံစားနေကြရသည်။9] ။ ထို့ကြောင့်အစောပိုင်းကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုစောစီးစွာကြိုတင်လေ့လာထားသည့်အချက်များအားနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုတိုက်ဖျက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှိအန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူသည်မိသားစု၊ မိဘများ၊ သက်တူရွယ်တူများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီကဲ့သို့သောအရေးကြီးသောဘဝကဏ္domများမှလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကြမ်းတမ်းသောမိဘအုပ်ထိန်းမှုကဲ့သို့သောမိသားစုနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်များ [10-11] အနိမ့်ဆုံးမိဘထိန်းချုပ်မှု  နှင့်မိသားစုစည်းလုံးမှု  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွန့်စားမှုယူခြင်းအပြုအမူအတွက်အန္တရာယ်အချက်များအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခံရပြီးနောက်ခံယန္တရားများကိုလည်းတင်ပြသည်။ (ဥပမာ - မိဘထိန်းချုပ်မှုနိမ့်ခြင်း→ထကြွလွယ်သောထိန်းချုပ်မှုနိမ့်ခြင်း→အန္တရာယ်များသောအပြုအမူများသို့မဟုတ်အစောပိုင်းမတော်မတရားပြုမှုဆက်ဆံမှုများ→အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုများ→စွန့်စားနိုင်သောအပြုအမူ) ။ အလားတူပင်အခြားလေ့လာမှုများကကွဲပြားခြားနားသောသီအိုရီအမြင်များမှငြင်းခုံခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဖြစ်နိုင်သောရှေ့ပြေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာပြproblemနာအပြုအမူသီအိုရီ။14] ပြproblemနာအပြုအမူများသည်စပျစ်သီးပြွတ်များတတ်သည်ဟုစောဒကတက်သည်။ ထို့ကြောင့်အစောပိုင်းပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအပါအ ၀ င်နောက်ပိုင်းတွင်အန္တရာယ်များသည့်အပြုအမူများနှင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။15-16] ။ အလားတူပင်လူမှုရေးထိန်းချုပ်မှုသီအိုရီ  လူမှုရေးနှောင်ကြိုးကင်းမဲ့ခြင်း (ဥပမာ၊ ကျောင်းနိမ့်ကျသောကတိကဝတ်ပြုခြင်း) သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအပါအ ၀ င်လူတစ် ဦး ချင်းကိုသစ္စာမဲ့မှုအတွက်လွှတ်ပေးခဲ့သည်18] ။ အခြားအကြောင်းရင်းများသည်လိင်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုရိုးရှင်းစွာပေးပြီးရင့်သီးသောဆက်ဆံရေးရှိသူများကဲ့သို့အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ဆက်နွယ်သည်။15, 19] ။ ဤအချက်များသည်အန္တရာယ်များသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ဆက်နွယ်နေသော်လည်းလေ့လာမှုများကဤအရေးကြီးသောရှေ့ပြေးများကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာအန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ - မီဒီယာတွင်လိင်အကြောင်းအရာများသို့မဟုတ်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာ (SEM) နှင့်ခိုင်မာသောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။20-22] ။ Strasburger et al ။  မီဒီယာများမှနိဂုံးချုပ်ထားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများသည်လိင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအပြုအမူများ၊ သဘောထားများနှင့်ယုံကြည်မှုများတွင်ကလေးသူငယ်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးသောသိသာထင်ရှားသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ရိုက်24] SEM နှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်တစ် ဦး ချင်းစီအားဘဝနောက်ပိုင်းတွင်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသောလိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာလိင်သဘောထားများကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ပိုမိုထူထောင်ရန်ပိုမိုစေသည်။ အခြားလေ့လာမှုများအရ SEM နှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။25-26] ။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရမီဒီယာ၌လိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၏သက်ရောက်မှုများသည်သိမ်မွေ့မှုရှိသော်လည်းထိန်းချုပ်ရန်နှင့်တိုင်းတာရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။27] ။ အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုနားလည်သောအခါ SEM သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
SEM နှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်တစ် ဦး ချင်းစီအားအနာဂတ်တွင်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူအားထိခိုက်စေနိုင်သော်လည်းအကြောင်းရင်းသုံးရပ်ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်များက ပို၍ ဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး စွာ SEM သည်ပျံ့နှံ့သည်သာမကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်လည်းသြဇာညောင်းသည်။28-30] ။ ဥပမာအားဖြင့်, Owen et al ။ [29ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများပြန့်ပွားမှုသည်“ လူငယ်များ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုမကြုံစဖူးနှင့်မတူကွဲပြားသောနည်းများဖြင့်လွှမ်းမိုးခဲ့သည်” ဒုတိယအချက်မှာဆယ်ကျော်သက်များသည် SEM ကိုအများဆုံးစားသုံးသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။31-32] နှင့်မီဒီယာပုံဖော်ခြင်းကိုမှန်ကန်သည်ဟုယူမှတ်သည်။32] ။ ထို့အပြင်ဆယ်ကျော်သက်များသည်မီဒီယာကိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်း (ဥပမာ၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့်နားလည်ခြင်း) အပေါ်တွင်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ မီဒီယာအားသူတို့၏လိင်၊ ချစ်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်နှင့်သတ်မှတ်ရန်မကြာခဏခွင့်ပြုသည်။33] ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများစွာတွင် SEM ကိုတရား ၀ င်သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်တားမြစ်ထားသောအသီးများကြောင့်လူငယ်များကိုပိုမိုဆွဲဆောင်စေသည်။34].
အထက်ပါကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုကဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်များသည် SEM ကိုသုံးစွဲသူများဖြစ်ပြီး SEM ကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ သို့သော် SEM ၏ပါဝင်မှုသည်“ အန္တရာယ်မရှိ” လျှင် SEM နှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေသည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့သောသူများက SEM သည်လိင်ပညာရေးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်ဟုအငြင်းပွားကြသည်။35-36] နှင့်ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုသဘောထားများတိုးပွားလာသည်။37] ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်သုတေသနပြုချက်အရ SEM ၏ပါဝင်မှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုကျေနပ်အားရစွာပုံဖော်ခြင်းနှင့်ဆိုးကျိုးများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုအနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမပေးဘဲထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်38] အမျိုးသမီးများအားဂုဏ်သိက္ခာကျစေပြီး“ ရင်းနှီးမှုနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းမှဝေးကွာသွားစေခြင်း” (စ။ ၉၈၄)39] နှင့်အလွန်အမင်းခွင့်ပြုထားသောလိင်ဆိုင်ရာဇာတ်ညွှန်းကိုပေးပို့သည်။24] ။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်ယခင်လေ့လာမှုများအရမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင် SEM နှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အစောပိုင်းလိင်ဆက်ဆံမှုပွဲများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုပြသခဲ့သည်။40-41] ကွန်ယက်ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း / အန္တရာယ်ကင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှု 20, 25] နှင့်မျိုးစုံလိင်ဆက်ဆံဖက် [42-43] ။ သို့သော် SEM ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အန္တရာယ်ရှိသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုအခြားလေ့လာမှုများတွင်ရှင်းလင်းစွာမတွေ့ရပါ။44-48] ။ ဥပမာအားဖြင့်မကြာသေးမီကပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုအရ SEM ထိတွေ့ခြင်းသည်အစောပိုင်းလိင်ဆက်ဆံမှုပွဲများနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။48] သို့မဟုတ်မျိုးစုံလိင်ဆက်ဆံဖက် (ဆိုလိုသည်မှာ၊ လိင်ကြင်ဖော်ဘက် ၂ ခုထက်ပိုသည်) .
နမူနာအမျိုးမျိုးနှင့်တိုင်းတာချက်များကွဲပြားမှုရှိသော်လည်းနမူနာရောနှောထားသောရလဒ်များမှာချန်လှပ်ထားသည့်အမျိုးမျိုးသောဘက်လိုက်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဘက်လိုက်မှု (ဆိုလိုသည်မှာလိင်တက်ကြွသောလူငယ်များသည်မီဒီယာတွင်လိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုပိုမိုကြည့်ရှုနိုင်ဖွယ်ရှိသည်) ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုကိုမသိရှိနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ SEM ထိတွေ့မှုနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ49-51] ။ Tolman နှင့် McClelland စောဒကတက်ကြသည် “ လိင်ဆိုင်ရာမီဒီယာကိုကြည့်ခြင်း၏အကျိုးဆက်များသည် 'ကြက်သို့မဟုတ်ကြက်ဥ' စိန်ခေါ်မှုကြောင့် "; ဆိုလိုသည်မှာလိင်ပွင့်လင်းမှုရှိသည့်လူငယ်များသည် SEM ကိုပိုမိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်းရှိ၊ ကျပန်းထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု (RCTs) ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ “ ရွှေစံ” သည်ဥပဒေရေးရာ (ဥပမာအရွယ်မရောက်သေးသူများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခြင်း) နှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ (ဥပမာကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သောအခြေအနေများသို့တစ် ဦး ချင်းစီအားခန့်အပ်ခြင်း) ကြောင့်အသုံးမပြုနိုင်ပေ။ Self- ရွေးချယ်မှုဘက်လိုက်မှုအတွက်အကောင့်အတွက်အခြားဘုံနည်းလမ်းတစ်ခုကိုက်ညီခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ယခင်လေ့လာမှု (၃) ခုတွင် propensity ရမှတ်ကိုက်ညီမှုကိုအသုံးပြုထားပြီး SEM ထိတွေ့မှုသည်လိင်မှုပြုခြင်းနှင့်မပတ်သက်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။46-47, 49] ။ သို့သော် propensity ရမှတ်များသည်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်ကွဲပြားခြားနားမှုများကို (ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်) (ဆိုလိုသည်မှာကြည့်ရှုနိုင်သောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီခြင်း) ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ကြည့်ရှု။ မရသောသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောမှု (ဥပမာ - မမြင်ရသောကွဲပြားခြားနားမှုများ) အတွက်စာရင်းကိုင်ရာတွင်ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ ဤအကန့်သတ်ချက်ကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ RCT ကိုအကြမ်းဖျင်းနည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်ကိရိယာတစ်ခု၏ variable (IV) အပါအ ၀ င်ဆက်ဆံရေးကိုခန့်မှန်းရန် panel data ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အားစနစ်တကျအသုံးပြုသောအခါ52], IV နည်းလမ်းသည်စူးစမ်းလေ့လာရေးအချက်အလက်များ (ဆိုလိုသည်မှာထိရောက်သောဆက်နွယ်မှု) မှကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ထုတ်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
နည်းစနစ်ဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များအပြင် SEM ၏အမျိုးမျိုးသောပုံစံများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားစေနိုင်ခြင်းရှိမရှိသုတေသနဆိုင်ရာအာရုံစူးစိုက်မှုများစွာမရရှိခဲ့ပါ။ ယခင်လေ့လာမှုများစွာသည်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသောအမျိုးအစားများ (ဥပမာ - X ရုပ်ရှင်ကားများသို့မဟုတ် SEM ဝက်ဘ်ဆိုက်များ) ကိုသာအဓိကထားခဲ့သည်။44-48] နှင့်အချို့သောဆိုးကျိုးများ (ဥပမာ၊ အစောပိုင်းလိင်ဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်သို့မဟုတ်မျိုးစုံလိင်ဆက်ဆံဖက်များ) ။ ငါတို့သိသည်အတိုင်း, ယခင်လေ့လာမှုတစ်ခုသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းအများအပြားအမျိုးအစားများ၏ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာနှင့်အမျိုးမျိုးသော SEM ပုံစံများနှင့်ထိတွေ့မှုကျပန်းလိင်နှင့်အစောပိုင်းလိင်ပွဲ ဦး ထွက်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူအပြုသဘောဆက်စပ်ခဲ့သည်တွေ့ရှိခဲ့  ။ SEM ထိတွေ့မှုနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်စွန့်စားရသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်အန္တရာယ်များသည့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ဘက်စုံသုံး SEM ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုပျော့ပြောင်းပြီးစစ်ဆေးမှုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားဆက်နွယ်မှု၏ရလဒ်များကိုရောနှောထားသောရလဒ်များ၊ နည်းစနစ်ဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ SEM ထိတွေ့မှုနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူမျိုးစုံသည်မတော်လျော်ကြောင်းအချိန်ကသတ်မှတ်ထားသည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်ယခင်လေ့လာမှုများသည်အနောက်တိုင်းနမူနာများ (ဥပမာအမေရိကန်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ဥရောပနိုင်ငံများ) အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ SEM ၏ထိတွေ့မှုနှင့်အန္တရာယ်ရှိသည့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့် ပိုမို၍ ရှေးရိုးစွဲလူ့အဖွဲ့အစည်းများ (ဥပမာအာရှနိုင်ငံများ) နှင့်၎င်း၏ဆက်ဆံမှုကိုလေ့လာဆန်းစစ်ထားသည်။ ရရှိနိုင်သောလက်ရှိစာပေများအရ SEM ထိတွေ့မှုနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအမူအကျင့်များသည်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများထက်အာရှယဉ်ကျေးမှုများတွင်အတော်လေးကွဲပြားခြားနားပုံရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အရှေ့အာရှနိုင်ငံများမှလေ့လာမှုများအရတရုတ်နိုင်ငံတွင်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်များကြား SEM ထိတွေ့မှုနှုန်းသည် ၅၀% - ၄.၅ မှ ၅၇% အထိရှိသည်။53] ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၏ ၄၀ မှ ၄၃ ရာခိုင်နှုန်း၊54] နှင့်ကိုရီးယား  နှင့်ဟောင်ကောင်တွင် ၉-၅၃% 56]; ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံများမှလေ့လာမှုများ57] အင်္ဂလန်  ဆွီဒင်နိုင်ငံ59], ဂျာမနီ  နှင့်သြစတြေးလျ  များသောအားဖြင့်ထိတွေ့မှုနှုန်းကို ၈၀% နှင့်အထက်ဖော်ပြသည်။ အလားတူစွာအစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုဥပမာအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ငယ်ရွယ်စဉ်တွင်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုသည့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏အရွယ်အစား (ဆိုလိုသည်မှာ≦ ၁၆ နှင့်≦ ၁၄) သည်အနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အာရှထက်များသောအားဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသည်။62-64] ။ ဤသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုများကြောင့်အနောက်နိုင်ငံများမှရလဒ်များကိုပိုမိုရှေးရိုးစွဲအရှေ့အခြေအနေသို့ပုံတူကူးရန်အရေးကြီးသည်။ ဗီလီဇိုရိုနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ  ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခြေအနေများတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာခြင်းသည်ယဉ်ကျေးမှုများတူညီခြင်းနှင့်တူညီသောဖြစ်ရပ်၏ကွဲပြားခြားနားမှုများအပေါ်များစွာအလင်းဖြာပေးသည်ဟုစောဒကတက်ကြသည်။ ထို့အပြင်အချို့သောအာရှနိုင်ငံများသည်တရုတ်နိုင်ငံရှိလူငယ်များအကြားအိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးကူးစက်မှုနှုန်းတိုးပွားလာခြင်းကဲ့သို့သော STIs ပျံ့နှံ့မှုပိုမိုများပြားလာသည်။53, 66] နှင့်တောင်ကိုရီးယား  နှင့်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီနှင့်အခြား STIs (ဥပမာ gonorrhea) နှစ်မျိုးလုံးသည်ထိုင်ဝမ်ရှိဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်များ (၁၁-၂၉) တို့တွင်အမြင့်ဆုံးနှုန်းဖြစ်သည်။8] ။ လေ့လာမှုအနည်းငယ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအလားတူရလဒ်များရရှိခဲ့သော်လည်းဤလေ့လာမှုများသည်အထက်ဖော်ပြပါကန့်သတ်ချက်များမှခံစားခဲ့ရသည်။68, 53-54].
ဒီလေ့လာမှုက IV ခန့်မှန်းချက်နှင့်အလားအလာရှိသောဆောင်များတွင်ပါဝင်သောဒီဇိုင်းကို အသုံးပြု၍ အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင် SEM ထိတွေ့မှုနှင့်အန္တရာယ်ရှိသည့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုလေ့လာရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် SEM (ဥပမာ၊ အင်တာနက်နှင့်ရုပ်ရှင်) ပုံစံအမျိုးမျိုး၏အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလည်းလေ့လာခဲ့သည်။ အားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကို ပို၍ ရှေးရိုးစွဲလူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သောထိုင်ဝမ်မှနမူနာတစ်ခုဖြင့်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံတူခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။65] ။ ကျနော်တို့ SEM ထိတွေ့မှုနောက်ပိုင်းတွင်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းယူဆတယ်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပိုမို SEM ပုံစံများကိုအသုံးပြုသောအခါဆက်ဆံရေးပိုမိုအားကောင်းလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုကွဲပြားစွာခံစားကြရသည်။69] နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ပတ်သက်။ ကွဲပြားခြားနား socialized  အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုအပြင် SEM ထိတွေ့မှုနှင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားရှိကွဲပြားခြားနားမှုများကိုဆန်းစစ်ရန်ကျား၊ မခွဲခြားမှုကိုလည်းခွဲခြားထားသည်။
အချက်အလက်များကိုထိုင်ဝမ်လူငယ်စီမံကိန်း (TYP) မှကောက်ယူသည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်ထိုင်ဝမ်မြောက်ပိုင်းရှိမြို့နှစ်မြို့ (တိုင်ပေမြို့နှင့်ထိုင်ပေ) မှအငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းသားများနှင့်ခရိုင်တစ်ခု (ယီလန်ကောင်တီ) တို့ကိုအလားတူအဖွဲ့လိုက်လေ့လာမှုမှရရှိသည်။ ရွေးချယ်ထားသောကျောင်းတစ်ခုစီတွင်အတန်းတစ်ခုစီအတွက်ကျပန်းရွေးချယ်ခြင်း (၇) ခုရှိသည်th တန်း (J1) နှင့် 9th အတန်း (J3)) နှင့်ရွေးချယ်ထားသည့်အတန်းတစ်ခုစီမှကျောင်းသားအားလုံးကိုစုဆောင်းခဲ့သည်။ အခြေခံတွင်ပါဝင်သူများသည်အချို့သောလှိုင်းများမှာတစ်နှစ်ခြား။ မဖြစ်သော်လည်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိ (နှစ် ၉) အထိနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်သုတေသနအဖွဲ့သည်လှိုင်း ၁၀ ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသုံးနှစ်ခြား။ နောက်ထပ်ထပ်မံတိုးချဲ့မှုနှစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် (၂၀၁၄ တွင်လှိုင်း ၁၁ နှင့် ၂၀၁၇ တွင် ၁၂) ။ ဒီလေ့လာမှုက J2009 ဆောင်များတွင် (9th လှိုင်း 1 (အခြေခံ; ပျမ်းမျှအသက် = 13.3 (အခြေခံ) မှဒေတာ)SD = .49)) 10 လှိုင်းမှ (အသက် = 24.3 ဆိုလို)SD = .47)) ။
ဒီလေ့လာမှုက J1 ဆောင်များတွင် (7th လှိုင်း 1 (အခြေခံ; အသက်အရွယ် = 13.3 (SD ကို = .49) ကိုဆိုလို) အသက်) ကနေလှိုင်း 10 (အတိတ်အသက် = 24.3 (SD ကို = .47)) မှလှိုင်း 51 မှဒေတာ။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်ဝက်ခန့်သည်အမျိုးသားများဖြစ်သည် (၅၁%) ။ အစောပိုင်းလိင်ပွဲ ဦး ထွက်နှင့်မလုံခြုံသောလိင်ကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်နမူနာအရွယ်အစားမှာ ၂,၀၅၄ ဖြစ်ပြီး၊ လိင်ဆက်ဆံဖက်စုံများအတွက်မူ ၁,၄၇၇ ဖြစ်သည်။ နမူနာအရွယ်အစားကွာခြားချက်မှာတုန့်ပြန်မှုမရှိသည့်နှုန်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားနမူနာအရွယ်အစားကျဆင်းခြင်းအကြား - လှိုင်းကြားကာလအချိန်ကာလမှာယခင်လှိုင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် (ဆိုလိုသည်မှာလှိုင်း ၉ နှင့် ၁၀ အကြားနှစ်နှစ်ခွဲအတွင်း) ပိုရှည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြေခံဒေတာ (လှိုင်း ၁) နှင့်လှိုင်း ၂ ဒေတာ (ဆိုလိုသည်မှာ SEM ထိတွေ့မှု) သည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏အတန်းတွင်းမိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံစာအပေါ်အခြေခံသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်မိဘပညာရေးနှင့်မိသားစု ၀ င်ငွေအတွက်အပြိုင်မိဘစစ်တမ်းကိုအိမ်တွင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းမှပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာရပ်များ (လှိုင်း ၈၊ ၉ နှင့် ၁၀) ၏နောက်ပိုင်းလှိုင်းများအတွက်အချက်အလက်အားလုံးကိုစုဆောင်းရန်အတွက်အိမ်တွင်းအင်တာဗျူးကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အခြေခံ (လှိုင်း ၁) တွင်ပါ ၀ င်ရန်သဘောတူခဲ့သောဆယ်ကျော်သက်အားလုံးသည်နှုတ်ဖြင့်သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ထိုပါဝင်ဆင်နွှဲသောဆယ်ကျော်သက်များအတွက်၎င်းတို့၏ဇီဝဗေဒမိဘများသို့မဟုတ်တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူများသည်စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့အားဤသုတေသနတွင်ပါ ၀ င်ရန်ဖိတ်ကြားခဲ့ပြီး ၉၇% ခန့်မှာပါ ၀ င်ခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုကိုအမျိုးသားယန်မင်တက္ကသိုလ် (YM2,054E) ၏အတွင်းပိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှအတည်ပြုပြီးပထမဆုံးစာရေးသူသည်ဆရာ ၀ န်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့မှု (လှိုင်း ၂)
ဤ variable ကိုလှိုင်း2(mean age = 14.3) တွင်မေးခွန်းတစ်ခုကိုသုံးပြီးတိုင်းတာသည်။ “ အောက်ပါအရွယ်ရောက်ပြီးသူသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ထားသော (R-rated) မီဒီယာတစ်ခုခုကိုမြင်ဖူးပါသလား။ ” သူတို့ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ ရုပ်ပြစာအုပ်များ၊ ဝတ္ထုများ၊ ရုပ်ရှင်နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သောမီဒီယာပုံစံခြောက်မျိုးဖြင့်စာရင်းပေးခဲ့သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများတွင်“ အရွယ်ရောက်သူသာ” နှင့်“ R-rated မီဒီယာ” သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝအရမလွဲမသွေဖြစ်သော်လည်း၊Xian Zni Ji) ကိုထိုင်ဝမ်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများ (ဥပမာ - လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အချည်းစည်းရှိခြင်း) ကိုရည်ညွှန်းသည်ကိုနားလည်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဤအရာသည်ရည်ရွယ်သည့် SEM အကြောင်းအရာကိုဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ SEM ထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောပစ္စည်းများမှာအထိခိုက်မခံသော၊ ထို့ကြောင့်သင်တန်းသားများသည်အစီရင်ခံရန်ဆန္ဒမရှိကြပေ။ ဤအရာကိုရှောင်ရှားရန် TYP စစ်တမ်းအားလုံးသည်ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံစာဖြစ်ပြီးကျောင်းသားများ၏စာသင်ခန်းတွင်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ကျောင်းသားများနှင့်သုတေသနအဖွဲ့လက်ထောက်များသာရှိသည်။ သုတေသနလက်ထောက်များကကျောင်းသားများအား ၄ င်းတို့၏စစ်တမ်းတွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုသုတေသီများမှမည်သူမှမြင်မည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့်စစ်တမ်းအားလုံးသည်အမည်မသိသူများဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်။ SEM ထိတွေ့မှုကိုဖမ်းယူနိုင်ရန်အတွက် variable နှစ်ခုကိုဖန်တီးထားသည်။ ယခင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သောပုံစံများကိုရေတွက်ခဲ့ရာရမှတ်0(ထိတွေ့မှုမရှိ) မှ (၆ ခုစလုံးတွင်အသုံးပြုသည်) အထိရှိသည်။ အဆုံးစွန်သောအဘို့, သင်တန်းသားများကို SEM ထိတွေ့မှု (6) နှင့် Non- ထိတွေ့မှု (1) သို့ခွဲခြားခဲ့သည်။
အန္တရာယ်များသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ (လှိုင်း ၈ လှိုင်း ၁၀)
ဒီ variable ထဲမှာအပြုအမူသုံးခုပါဝင်သည်: အစောပိုင်းလိင်ပွဲ ဦး ထွက်, အန္တရာယ်ကင်းလိင်နှင့် မျိုးစုံလိင်ဆက်ဆံဖက်. အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက် လှိုင်း 8 (အသက်အရွယ် = 20.3 ယုတ်) မှာတိုင်းတာခဲ့သည်။ ပါ ၀ င်သူတိုင်းကိုသူ / သူမ၏ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုအကြောင်းသတင်းပို့ရန်တောင်းဆိုခံခဲ့ရသည်။ မည်သည့်အသက်အရွယ်ကိုစောစီးစွာပွဲ ဦး ထွက်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်ကိုသဘောတူညီမှုသည်စာပေတွင်မရရှိသေးပါ။ လေ့လာမှုအမျိုးမျိုးသည်အသက် ၁၄ နှစ်နှင့်အထက်ကဲ့သို့သောအသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။71] ၁၆ နှစ်အရွယ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ငယ်သည်72-73] သို့မဟုတ် ၁၇/၁၈ နှစ်နှင့်အထက်ပင်ရှိသေးသည်။74] ။ အသုံးပြုသောအသက်ပေါ် မူတည်၍ အစောပိုင်းအစပျိုးသူများ၏ရာခိုင်နှုန်းသည် ၁၇% မှသည်။72]% 44 မှ  ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာအသက် ၁၇ နှစ်နဲ့အထက်လူငယ်များကို cut-off အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပြီး ၁၁.၉% ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ရလဒ်ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။n အစောပိုင်းအစပျိုးအဖြစ်ခွဲခြားခံရနမူနာ၏ = 245) ။ အကြောင်းပြချက်နှစ်ရပ်ကြောင့်ထိုင်ဝမ်အခြေအနေတွင်ဤအကန့်အသတ်သည်အဓိပ္ပါယ်ရှိခဲ့သည်။ ပထမ၊ အသက် ၁၈ ကိုတရားဝင်အားဖြင့်အရွယ်ရောက်သူအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ထို့အပြင်အသက် ၁၈ နှစ်သည်နွေရာသီတွင်အမြင့်ဆုံးရာသီဖြစ်ပြီးဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များသည်အထက်တန်းကျောင်းပြီးသောကောလိပ်တက်တော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်များသည်အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ တောင်ကိုရီးယား၌လည်းပညာရေးစနစ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုတူသောနေရာဖြစ်သည်။75] ။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်ဤဖြတ်တောက်ခြင်းသည်အထက်တန်းကျောင်းသားများ၏ကိုယ်စားပြုသောနမူနာများနှင့်နီးသည် (၁၀th-12th အထက်တန်းကျောင်းသား ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်လိင်ဆက်ဆံပြီးဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။76].
မလုံခြုံသောလိင် လှိုင်း ၈ တွင်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းတစ်ခု (ဥပမာ -“ သင်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုသလား”) ကိုအကဲဖြတ်သည်။ တုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားများတွင်“ အတွေ့အကြုံမရှိ၊ ”“ အမြဲတမ်းကွန်ဒုံးကိုသုံးပါ၊ ”“ တခါတရံကွန်ဒုံးကိုသုံးပါ” နှင့်“ ကွန်ဒုံးကိုအများအားဖြင့်အသုံးမပြုပါ” တို့ပါ ၀ င်သည်။ နောက်ဆုံးအဖြေနှစ်ခုကိုရွေးချယ်သောသူများသည်မလုံခြုံသောလိင်ကိုကျင့်သုံးရန်စဉ်းစားသည်။ ဤအတိုင်းအတာသည်အသုံးများသောတိုင်းတာမှုများနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည် (ဥပမာ၊ မကြာသေးမီကလိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း)၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အခြေအနေတစ်ခုတွင်မကြာသေးမီကအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းထက်သာမန်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုပေးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အန္တရာယ်ကင်းသောလိင်ဆိုင်ရာအမူအကျင့်၏ "စစ်မှန်သော" အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြသည်။ ဤအတိုင်းအတာကို အခြေခံ၍ မလုံခြုံသောလိင်အလေ့အကျင့်၏ရာခိုင်နှုန်းသည် ၁၈% ရှိသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ၁၀ လှိုင်း (ဆိုလိုသည်မှာအသက် ၂၄.၃) တွင်သင်တန်းသားများကိုသူတို့၏လိင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏တစ်သက်တာကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုခဲ့သည် မျိုးစုံလိင်ဆက်ဆံဖက်။ ကိန်းဂဏန်းများသည်0(လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံမရှိ) မှ ၂၅ အထိ (mean = 25; SD = 1.76) အထိရှိသည်။ စွန့်စားနိုင်သောလိင်အပြုအမူများတွင်အမျိုးမျိုးသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများပါ ၀ င်သော်လည်းအကဲဖြတ်သည့်အပြုအမူများအားလုံးသည်အများအားဖြင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ STIs ကူးစက်မှုနှုန်းကိုမြင့်တက်စေသည်။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှုသည်အစောပိုင်းလိင်ဆက်ဆံမှုပြုခြင်း၊ မလုံခြုံသောလိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံဖက်များအကြောင်းကိုအန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူသုံးမျိုးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ယခင်လေ့လာမှုတစ်ခုကဤအပြုအမူသုံးခုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။1] နှင့်အခြားသူများသည်ဤသုံးမျိုးအနက်မှနှစ်ခုကိုအန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူအတိုင်းအတာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။48] ။ ထို့အပြင်အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်နှင့်လိင်ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်စုံတွဲများသည်အန္တရာယ်မကင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့် STIs ၏ကျုံ့သွားနိုင်မှုမြင့်မားမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။77-78] ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်းအတာသည်ပြည့်စုံလုံလောက်မှုမရှိနိုင်သော်လည်း၎င်းတွင်ယခင်လေ့လာမှုများတွင်အကဲဖြတ်ထားသောအရေးကြီးသောအန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများပါဝင်သည်။
အပျိုဖော်ဝင်ချိန် (လှိုင်း ၁)
အပျိုဖော်ဝင်ချိန်ကိုလှိုင်း ၁ တွင် (ဆိုလိုသည်မှာအသက် ၁၃ ဒသမ ၃၃ နှစ်) ကို Self- report မှအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ မိန်းကလေးများအတွက် Pubertal Development Scale (PDS) မှကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်ပစ္စည်းလေးမျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။79]: ဆီးခုံမို့မို့ဆံပင်ပေါ်ထွန်းခြင်း၊ အရေပြားပြောင်းလဲခြင်း၊ မီးယပ်စချိန်အသက်နှင့်တိုးတက်မှုနှုန်း (α = .40) ။ တုန့်ပြန်မှုအမျိုးအစားသည် ၁ ခုမှ (စတင်၍ မရသေး) မှ ၄ အထိ (အပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီး) အထိရှိသည်။ မိန်းကလေးများအားစံသတ်မှတ်ထားသည့်သွေဖီမှုတစ်ခု၏ဖြတ်တောက်မှုကို အခြေခံ၍ အပျိုဖော်ဝင်အချိန်ကိုက်အုပ်စုသုံးစုခွဲထားသည်။SDယုတ် PDS ရမှတ်မှ:): (1) အစောပိုင်း (1 SD ယုတ်အထက်), (2) နှောင်းပိုင်းတွင် (1 SD (3) on- အချိန်ယုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနှင့်။ ယောက်ျားလေးများအတွက်၊ PDS မှပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ အသံပြောင်းလဲခြင်း၊ ဆီးခုံမို့မို့ဆံပင်ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ မုတ်ဆိတ်ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ အရေပြားပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ကြီးထွားမှုနှုန်း (α = .68) တုံ့ပြန်မှုများနှင့်အုပ်စုဖွဲ့ခြင်းအစီအစဉ်သည်မိန်းကလေးများနှင့်တူသည်။ ဤအုပ်စုဖွဲ့နည်းကိုယခင်လေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။80-81] နှင့် PDS ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တရားဝင်မှုကိုအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။82] ။ PDS သည်အပျိုဖော်ဝင်ရန်သင့်လျော်သောအတိုင်းအတာကိုပြသရန်နှင့်အပျိုဖော်ဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ပုဂ္ဂလဒိand္နှင့်လူမှုရေးရှုထောင့်များကိုဖမ်းယူရန်ပြသခဲ့သည်။83] ။ သို့သော်ဤအတိုင်းအတာကိုယခင်လေ့လာမှုများတွင်အတည်ပြုပြီးဖြစ်သော်လည်းယဉ်ကျေးမှုချင်းကွဲပြားစွာအသုံးပြုသောအခါအလားတူအယူအဆကိုဖမ်းယူနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သွယ်ဝိုက်တွေ့ရှိချက်နှစ်ခုကဒီစိုးရိမ်မှုကိုဖြေရှင်းလိမ့်မယ် ပထမ ဦး စွာစာပေတွင်ပြသခြင်းကအစောပိုင်းအပျိုဖော်ဝင်ချိန်သည်ဆိုးသွမ်းမှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်ဆက်နွှယ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။84-85] နှင့်ဤလေ့လာမှုကဲ့သို့တူညီသော Datasets ကိုအသုံးပြုကြောင်းလေ့လာမှုများနှစ်ခုကဒီဆက်ဆံရေးကိုသရုပ်ပြ [80, 86] ။ ဒုတိယအချက်မှာထိုင်ဝမ်မြီးကောင်ပေါက်များ၏အမျိုးသားကိုယ်စားပြုနမူနာမှမီးယပ်စချိန်အသက်အရွယ်သည်လက်ရှိနမူနာနှင့်အလွန်ဆင်တူသည် (အမျိုးသားကိုယ်စားလှယ်နမူနာ - ၇၂ နှစ်မတိုင်မီ (သို့) ၇ နှစ်)th အတန်း၊ လက်ရှိလေ့လာမှု: မတိုင်မှီသို့မဟုတ် 88 မှာ 7%th တန်း)  ။ အချုပ်အားဖြင့် PDS သည်ထိုင်ဝမ်တွင်အပျိုဖော်ဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုသင့်လျော်စွာတိုင်းတာသည်။ နောက်ဆက်တွဲဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင် PDS ရမှတ်များပြောင်းလဲခြင်းကို IV ကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ထိန်းချုပ်မှု variable တွေကို (လှိုင်း 1 နှင့်လှိုင်း 2)
လက်ရှိလေ့လာမှုသည်ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်နိုင်ချေအများအပြားအတွက်ကျား၊88] အဖေဘက်မှပညာရေးအဆင့်၊89] လစဉ်မိသားစုဝင်ငွေ90] မိသားစုမတည်မငြိမ်မှု , မောင်နှမအရေအတွက်, အဟောင်းတွေမောင်နှမ၏ရှေ့မှောက်တွင်  မိဘထိန်းချုပ်မှု  မိသားစုစည်းလုံးမှု , ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည်  ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ကျန်းမာရေး  စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ  အချစ်ဇာတ်လမ်း98] နှင့်ကျောင်းပုံသေအကျိုးသက်ရောက်မှု  ။ တစ်ခုချင်းစီကို variable ကိုဆယ်ကျော်သက်လိင်သို့မဟုတ် SEM နှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖြစ်စေနှင့်ဆက်စပ်သောတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်မိသားစုနှင့်ဆက်စပ်သောကိန်းရှင်များ (ဥပမာ၊ မိဘထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပေါင်းစည်းမှု) သည်မိသားစုနှင့်မိဘများသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏မကောင်းသောအပြုအမူများ (ဥပမာ - SEM နှင့်ထိတွေ့နိုင်သောလိင်အပြုအမူ) ကိုလွှမ်းမိုးရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ role မှပါဝင်နိုင်သည်။ အလားတူစွာ၊ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပြsocialနာရှိသည့်လူမှုရေးထိန်းချုပ်မှုသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောအပြုအမူများဖြစ်သော SEM ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုတားဆီးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်လူမှုရေးသင်ယူမှုရှုထောင့်မှေးမှိန်ခြင်းနှင့်သက်တူရွယ်တူများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်ထွန်းသစ်စအရွယ်တွင် deviance တွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သည်ဟုငြင်းခုန်လိမ့်မည်။100]; ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မွေးချင်းအရေအတွက်ကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ အခြားအချက်များ (ဥပမာ၊ ကျောင်း) သည်ဆယ်ကျော်သက်များသည်သူတို့၏အပြုအမူများ (ဥပမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး) ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်အမျိုးမျိုးသောထိတွေ့မှုများရရှိသည့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ အားလုံး variable တွေကိုလှိုင်း 1 သို့မဟုတ် 2. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည် ကျား, မ အထီး (1) သို့မဟုတ်အမျိုးသမီး (0) အဖြစ် coded ခဲ့သည်။ နှစ်ခုလုံး အဖေ နှင့် မိခင်ပညာရေး အဆင့် ၁ ကိုမိဘစစ်တမ်းမှလှိုင်း ၁ တွင်ရရှိသည်။ အထက်တန်း၊ အထက်တန်း၊ အငယ်တန်းကောလိပ်များထက်အထက်အမျိုးအစားသုံးမျိုးကိုရရှိသည်။ အားလုံးနောက်ဆက်တွဲဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင်နှစ်ခုအတု variable တွေကိုရည်ညွှန်းအုပ်စုအဖြစ် "အထက်တန်းကျောင်းထက်နိမ့်" နဲ့အတူအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ လစဉ်မိသားစုဝင်ငွေမိဘ၏စစ်တမ်းမှလှိုင်း ၁ တွင်တိုင်းတာသည်ကို (ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာအသစ်အပေါ် အခြေခံ၍) အုပ်စုငါးခုခွဲခဲ့သည်။ ၃၀၀၀၀ အောက်၊ ၃၀,၀၀၀ မှ ၅၀,၀၀၀၊ ၅၀,၀၀၁-၁၀၀,၀၀၀၊ ၁၀၀,၀၀၁ - ၁၅၀,၀၀၀ နှင့် ၁၅၀,၀၀၀ ကျော်တို့ဖြစ်သည်။ အလားတူပင် Dummy variable များကိုရည်ညွှန်းချက်အမျိုးအစားအဖြစ်“ ၃၀၀၀၀ ထက်နည်းသော” နှင့်အတူအသုံးပြုခဲ့သည်။ မိသားစုနဂိုအတိုင်း လှိုင်း2Self- အစီရင်ခံစာအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည့်ရည်ညွှန်းအုပ်စုအဖြစ် Non- နဂိုအတိုင်းနှင့်အတူ dichotomized variable ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ မွေးချင်းတိုင်းတာမှုအားလုံးသည်လှိုင်း ၁ တွင်ဆယ်ကျော်သက်များကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်အစီရင်ခံစာအပေါ်အခြေခံပြီးပါဝင်သူတစ် ဦး စီ၏မွေးချင်းများနှင့်မွေးချင်းတစ် ဦး စီ၏မွေးဖွားမှုပါ ၀ င်သည်။ ဒီအချက်အလက်ကနေ၊ မောင်နှမအရေအတွက် နှင့် အဟောင်းတွေမောင်နှမ၏ရှေ့မှောက်တွင်။ ၎င်းတွင်အုပ်စုသုံးစုပါ ၀ င်သည်။ ကလေး၊ ဟုတ်သည်၊ မဟုတ်ပါ (ရည်ညွှန်းအုပ်စု) ။ မိဘအုပ်ထိန်းသူထိန်းချုပ်မှု ဆယ်ကျော်သက်များကိုသူတို့၏မိဘများကနေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုငါးခု (ဥပမာ - ဖုန်းအသုံးပြုချိန်နှင့်တီဗွီအချိန်) ကိုထိန်းချုပ်မလားမေးသည့်ငါးခုသောပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များကပိုမိုမြင့်မားသောမိဘထိန်းချုပ်မှုကိုညွှန်ပြသည်။ မိသားစုစည်းလုံးမှု အပြန်အလှန်မိသားစုအကူအညီနှင့်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုကိုဖမ်းယူနိုင်သည့်ပစ္စည်း (၆) ခု၏စုဆောင်းမှုအပေါ်အခြေခံသည် (ဥပမာ -“ ငါစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အခါငါ့မိသားစုကနေနှစ်သိမ့်မှုရရှိနိုင်တယ်”) ။ ပစ္စည်းတစ်ခုစီသည်လေးချက်မှ Likert စကေး (ဆိုလိုသည်မှာ“ လုံးဝသဘောမတူ” မှ“ လုံးဝသဘောတူသည်”) အပေါ်အခြေခံသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များကမိသားစုစည်းလုံးမှုကိုပိုမိုမြင့်မားစေသည်။ ပညာသင်နှစ်စွမ်းဆောင်မှု “ ဒီစာသင်ကာလမှာမင်းရဲ့အတန်းအဆင့်ကဘာလဲ” ဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့အကဲဖြတ်ခံရတယ်။ တုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားများ (ထိပ် ၅)၊ ၂ (၆-၁၀)၊ ၃ (၁၁-၂၀) နှင့် ၄ (၂၁ နှစ်ကျော်) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ တုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားငါးခုကိုအသုံးပြုပြီး Self-rated ကျန်းမာရေးအပေါ်အခြေခံခဲ့သည်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီကိုအမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားထားသည်။ ဆိုး / အလွန်ဆိုးသည် (ရည်ညွှန်းအုပ်စု)၊ မျှတပြီးကောင်းသော / ကောင်းသည်။ စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ Symptom Checklist-7-Revised (SCL-90-R) မှမွေးစားခဲ့သော (၇) ခုသောစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာလက္ခဏာအတိုင်းအတာ (ဥပမာ -“ ငါစိတ်ဓာတ်ကျသည်ဟုခံစားရသည်”) ကို ဖြတ်၍ စုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။101] ။ ပစ္စည်းတစ်ခုစီသည်အမှတ် ၅ မှတ် (ဆိုလိုသည်မှာမဟုတ်ပါ (၀) မှဟုတ်သည်၊ အလွန်လေးနက်သည် (၄)) ကိုအခြေခံသည်။ စုစုပေါင်းရမှတ်ကိုတွက်ချက်ရန်ပစ္စည်း (၇) ခုကို ဖြတ်၍ အတိုချုပ်တွက်ချက်သည်။ ချိန်းတွေ့ခြင်းအတွေ့အကြုံသည်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များတွင်သူတို့တွင်ယောက်ျားလေး / မိန်းကလေးရှိသလားကိုမေးမြန်းသည့်အချက်တစ်ခုပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ကျောင်း၌မတွေ့ရှိရသည့်အချက်များကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ထိန်းချုပ်သည် ကျောင်းကပုံသေအကျိုးသက်ရောက်မှု နောက်ဆက်တွဲဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (အားလုံး variable တွေကိုများအတွက်ဖော်ပြရန်စာရင်းဇယားများတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် စားပွဲတင် 1).
အားလုံး variable တွေကိုများအတွက်ဇယား 1. ဖော်ပြရန်စာရင်းဇယား။
သာမန်အနည်းဆုံးရင်ပြင် (OLS) နည်းလမ်းကို အခြေခံ၍ linear ဖြစ်နိုင်ချေမော်ဒယ် (LPM) ကိုအန္တရာယ်ကြီးသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူသုံးခုတွင်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင် SEM ထိတွေ့မှု (အမြဲတမ်းထိတွေ့မှုနှင့်ပုံစံမျိုးစုံထိတွေ့မှု) ၏ longitudinal effects များကိုခန့်မှန်းရန်အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များအတွက်သဘောတူညီချက်သည် diitotomized (ဥပမာအစောပိုင်းလိင်ဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်နှင့်အန္တရာယ်ကင်းသောလိင်) အတွက် count / variable ကို (Poisson) အတွက် countit variable အတွက်အသုံးပြုသည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့မှာ OLS ကိုအကြောင်းပြချက်များစွာဖြင့်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာ Hellevik  LPM သည် applications အများစုတွင် logit model နှင့်နီးစပ်သော်လည်း၎င်း၏မြှောက်ဖော်ကိန်းများကရှင်းပြရန်ပိုမိုလွယ်ကူကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒုတိယအချက်မှာစာတမ်း၏အဓိကပင်ကိုယ်မူလပုံစံမှာ linear မော်ဒယ်ဖြစ်သောအဆင့်နှစ်ဆင့်အနည်းဆုံးရင်ပြင် (2SLS) ဆာဗာ variable variable ကိုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိန်းဂဏန်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရှိစေရန်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ပင်ကိုယ်သိခြင်း၏အဆင်ပြေစေရန်အတွက် linear ဆုတ်ယုတ်ခြင်းပုံစံများသို့မဟုတ် linear ဖြစ်နိုင်ခြေပုံစံများကိုအသုံးပြုသည်။ များစွာသော covariates များကိုထိန်းချုပ်ထားသော်လည်းကြည့်ရှုမရသောရှုပ်ထွေးသော variable များကြောင့်ခန့်မှန်းချေသက်ရောက်မှုသည်ဘက်လိုက်မှုရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် SEM ထိတွေ့မှုသည်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားအန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ်သက်ရောက်ခြင်း၊ ဘက်မလိုက်သောခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုကိုရှာဖွေရန်အတွက် IV ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အတူတူအလိုက်များအတွက်အပျိုဖော်ဝင်အချိန်ကိုက်အတွက်အပြောင်းအလဲ (အပျိုဖော်ဝင်စ ၁i နှင့် pubertal2i) SEM ထိတွေ့မှုအတွက်ကိရိယာတန်ဆာပလာအတွက်အသုံးပြုသည်။yဒီမှာ,iတစ် ဦး ချင်းဝိသေသလက္ခဏာများထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူပထမအဆင့်အတွက်Xi) နှင့်အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်း fixed သက်ရောက်မှု (ai0): (1) ဘယ်မှာ yဒီမှာ,i အသီးသီး Multi- ပုံစံ SEM ထိတွေ့မှုနှင့် SEM ထိတွေ့မှုအတွက်မှီခိုလျက်ရှိ၏ ဝေါဟာရ vi အမှားအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ အပျိုဖော်ဝင်ချိန်နှင့် SEM ထိတွေ့မှုအကြားဆက်နွယ်မှုသည်အကောင်းမြင်သင့်သည်။ က F ပူးတွဲစမ်းသပ်တူရိယာ (ဆိုလိုသည်မှာ, အပျိုဖော်ဝင်အချိန်ကိုက်) ပေါ်တွင်ကိန်းအားလုံးသုညဖြစ်ကြောင်းယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဘို့လျှောက်ထားသည်။ ဘယ်အချိန်မှာသက်ဆိုင်ရာ F-statistic 10 ကျော်လွန်, ထို့နောက်တူရိယာပြင်းပြင်းထန်ထန် SEM ထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
ဒုတိယအဆင့်ညီမျှခြင်းသည်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှိအန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူအပေါ် SEM ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခန့်မှန်းသည် (yအန္တရာယ်များသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ) ထွန်းသစ်စလူကြီးအတွက်: (2) ဘယ်မှာ yအန္တရာယ်များသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ အစောပိုင်းလိင်ပွဲ ဦး ထွက်၊ အန္တရာယ်မကင်းသောလိင်နှင့်လိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူများဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ချင်းဝိသေသလက္ခဏာများ (Xi) နှင့်အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်း fixed သက်ရောက်မှု (ai0) ၌ရှိသူများကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်ကြသည် ညီမျှခြင်း (1) နှင့်အတွက် endogenous variable ကို (2) သည် SEM ထိတွေ့မှု (yဒီမှာ,i) ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် SEM-viewer ၏သက်ရောက်မှုများနှင့် multi-modality SEM ထိတွေ့မှုကိုအန္တရာယ်ရှိသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ်တွင်သီးခြားခန့်မှန်းတွက်ချက်ပါမည်။ S1 နောက်ဆက်တွဲ).
အပျိုဖော်ဝင်ချိန်ကို IV IV အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး၎င်းသည်ခိုင်လုံသော IVs ၏အဓိကလိုအပ်ချက်နှစ်ခုနှင့်ကိုက်ညီသည်။103] ။ ယခင်ကုသမှုသည် IV နှင့်ကုသရန်အထူးသဖြင့် SEM ထိတွေ့ရန်လိုအပ်သည်။ အပျိုဖော်ဝင်မှုကိုဟော်မုန်းမြင့်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာပြပြီးလေ့လာမှုများအရ SEM ထိတွေ့မှုသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ပျံ့နှံ့နေသည်။ ထို့ကြောင့်အစောပိုင်းအပျိုဖော်ဝင်ခံစားနေရသောတစ် ဦး ချင်းစီသည် SEM နှင့် ၄ င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထက်ထိတွေ့မှုပိုများသည်။104-105] ။ ဤလိုအပ်ချက်အားစာရင်းအင်းမှတစ်ဆင့်လည်းစာရင်းအင်းဖြင့်အတည်ပြုနိုင်သည် F- စာရင်းအင်းF > 10) 2SLS ၏ပထမအဆင့်တွင်106] ။ Exogeneity, အခြားတစ်ဖက်တွင်, IV ဟာဆုတ်ယုတ်ညီမျှခြင်းအတွက်အမှားအသုံးအနှုန်းနှင့်အတူ uncorrelated ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ပထမ ဦး စွာအပျိုဖော်ဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုသည်လူအားလုံးနီးပါးခံစားရသည့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုတစ် ဦး ချင်းထိန်းချုပ်မှုမရှိသောမျိုးဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တို့ကလွှမ်းမိုးသည်။107] ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အမွှာလေ့လာမှုများကခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၅၀ မှ ၈၀% ခန့်သည်မီးယပ်စချိန်အချိန်ဇယား၏ကွဲပြားမှုများမှာမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအချက်များကြောင့်ဖြစ်ပြီးကျန်ရှိသောအားဖြင့်ခွဲဝေသုံးစွဲခြင်းမရှိသောပတ် ၀ န်းကျင်သို့မဟုတ်တိုင်းတာခြင်းအမှားများကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။108-109] ။ နောက်ဆုံးကော်လံနှင့်၏အောက်ခြေတွင်ပြသခဲ့သည်အဖြစ်အဆုံးစွန်သောအဘို့ စားပွဲတင် 1ဤစာတမ်းသည်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်နှင့်လူမှုစီးပွားအရင်းအမြစ်များအကြားဖြစ်နိုင်ချေဆက်စပ်မှုကိုဆန်းစစ်ထားပြီးအပျိုဖော်ဝင်ချိန်နှင့်အချို့သောစောင့်ကြည့်နိုင်သောလူမှုစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ (ဥပမာ၊ မိဘအဆင့်ပညာရေးနှင့်မိသားစုလစဉ်ဝင်ငွေ) အကြားသိသိသာသာဆက်စပ်မှုကိုမတွေ့ရပါ။ ထို့အပြင်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များ (ဥပမာ - ကျောင်းနှင့်မိသားစု) ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ထိန်းချုပ်ထားပြီး၎င်းသည်ချန်လှပ်ထားသည့်အမျိုးမျိုးသောဘက်လိုက်မှု၏စိုးရိမ်မှုကိုလျော့ပါးစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ IVs များသည်အန္တရာယ်များသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုဆုံးဖြတ်သည့်မစောင့်ကြည့်နိုင်သောအချက်များနှင့်မသက်ဆိုင်သောဖြစ်သင့်သည်။ ထို့အပြင်ခန့်မှန်းမော်ဒယ်နှစ်ခု IVs (Dummy variable တွေကို) ပါဝင်သည်။ Over- ဖော်ထုတ်ခြင်းစမ်းသပ် (J-test) သို့မဟုတ် Sargan-Hansen စမ်းသပ်မှု  ခန့်မှန်းသည့်ကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် 2SLS ခန့်မှန်းချက်တွင်တသမတ်တည်းရှိမရှိစာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်းကိုပေးနိုင်သည်။
ခိုင်လုံသော IV ဒီဇိုင်းသည်ကျိုးကြောင်းဆက်နွယ်မှုကိုခန့်မှန်းနိုင်သော်လည်း attribution သို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးနေသောအချက်အလက်များသည်ဤခန့်မှန်းချက်များကိုဘက်လိုက်ဆဲပင်။ ဤလေ့လာမှုသည်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောဘက်လိုက်မှုများကိုစစ်ဆေးရန်နည်းလမ်းများစွာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့၏သရုပ်ခွဲနမူနာသည်လှိုင်း ၂ ရှိ SEM စားသုံးမှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ရှိသူများအပေါ်အခြေခံသည်။ ဆာပ variable ကို (အပျိုဖော်ဝင်အချိန်ကိုက်) အပါအဝင်အခြားရှင်းလင်း variable တွေကိုအပေါငျးတို့သများအတွက်ပျောက်ဆုံးဒေတာ၏နှုန်း (ကြည့်ရှုပါ) စားပွဲတင် 1) ။ အကျိုးဆက်အားနောက်ဆက်တွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပုံစံများတွင်လက်ျာဘက်၌ရှိသည့် variable တွင်အချက်အလက်ပျောက်ဆုံးခြင်းသည်လေးနက်သောပြissueနာမဟုတ်ပါ။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်သည့်ပျောက်ဆုံးနေသောအချက်အလက်များမှာမနည်းနိူင်ပါ။ အစောပိုင်းလိင်ဆက်ဆံမှုအတွက် ၂၀% (၅၁၄ / ၂၅၆၈) နှင့်မလုံခြုံသောလိင်နှင့် ၄၂% (20 / 514) သည်လိင်ကြင်ဖော်ဘက်များစွာအတွက်ဖြစ်သည်။ ပျောက်ဆုံးနေသောအချက်အလက်အများစုမှာ attrition ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပထမအန္တရာယ်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာမေးခွန်းနှစ်ခု (ဥပမာ - အစောပိုင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ရှေ့နောက်မညီသောကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း) ကိုမဖြေသောသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာ ၉ ခုကိုလှိုင်း ၉ (သို့) လှိုင်း ၁၀ တွင်တူညီသောအချက်ကိုစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ခုချင်းစီကိုအမှတ်အသားပြုသည်။ ကျနော်တို့တုန့်ပြန်မပေးခဲ့ပါဘူးသောသူတို့အားကျဆင်းခဲ့သည်။ တတိယအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တွက်ချက်ခြင်းနမူနာများ၏ဖြန့်ဝေခြင်းကိုမူလအရွယ်အရအပျိုဖော်ဝင်ချိန်၊ SEM ထိတွေ့မှုနှင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သော variable များအားလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ စားပွဲတင် 1) ။ တွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, ယုတ်၏ခြားနားချက်များနှင့် SD ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးမျိုးသော imputed နမူနာများနှင့်အသုံးပြုသော variable တွေကိုအားလုံးအပေါ်မူရင်းနမူနာအကြားသာအသေးစားခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Heckman ရွေးချယ်ရေးမော်ဒယ် attrition အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောရှိမရှိကြည့်ရှုရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤပုံစံတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖယ်ထုတ်ခြင်းကန့်သတ်ချက်များအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သောအချက်လေးချက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဥပမာ - အိမ်ယာအမျိုးအစား (ဥပမာ - သီးခြားအိမ်တစ်လုံးသို့မဟုတ်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းတွင်နေထိုင်သည်)၊ လက်ရှိနေထိုင်မှုareaရိယာကိုချစ်ခြင်း၊ ရပ်ကွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု (ဥပမာ -“ သင်၏ရပ်ကွက်သည်လုံခြုံမှုရှိသည်ဟုထင်ပါသလား?”) ) နှင့်လက်ရှိလိပ်စာတွင်နေထိုင်သောနှစ်အရေအတွက်။ ရလဒ်များကိုတွေ့နိုင်ပါသည် စားပွဲတင် 2။ ၏အောက်ခြေအစိတ်အပိုင်းမှ စားပွဲတင် 2Wald စမ်းသပ်မှုများအရနမူနာ attrition နှင့်အန္တရာယ်ရှိသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားဆက်စပ်မှုသည်မော်ဒယ်အားလုံးတွင် (ဆိုလိုသည်မှာနှစ်ခုလုံးသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူညီသော) မတူညီကြောင်းဖော်ပြသည်။ တနည်းအားဖြင့် attrition အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများတွင်ပါဝငျ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောမဟုတ်ပါဘူး။ ဤရွေ့ကားအပိုစမ်းသပ်မှုရလဒ် variable တွေကိုအပေါ်ပျောက်ဆုံးဒေတာကျပန်းဖြစ်မည်အကြောင်းယုံကြည်မှုပေး။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်ရရှိလာသောခန့်မှန်းချက်များသည်ဘက်မလိုက်သော်လည်းတိကျမှုနှင့်စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်စံမှားယွင်းမှုများသည်အချက်အလက်အပြည့်အစုံအပေါ်အခြေခံထားသည့်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများထက်အမြဲတမ်းပိုမိုကြီးမားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စာရင်းအင်းစစ်ဆေးမှုအားလုံးသည်အငယ်တန်းအထက်တန်းအဆင့်တွင်စုစည်းနိုင်ရန်ညှိနှိုင်းထားသော heteroskedasticity-robust စံအမှားများနှင့်အတူနှစ်ဖက်စလုံးအယူအဆဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ Stata software (Stata 2; Stata Corp, College Station, TX) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဇယား ၂။ ပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ရလဒ်များအကြားဆက်နွယ်မှုအတွက်ရွေးချယ်မှုပုံစံများ1.
ညွှန်ပြအဖြစ် စားပွဲတင် 1, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဆယ်ကျော်သက် (50%) တဝက်ပျမ်းမျှတ ဦး တည်းပုံစံ (; SD ကို = 1.02 က M = 1.37) မှာအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် SEM ထိတွေ့ခဲ့သည်။ အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းမှာရုပ်ပြစာအုပ်များ (၃၂.၇%) ဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံးမှာမဂ္ဂဇင်းများ (၉.၄%) ဖြစ်သည်။ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများပျံ့နှံ့မှုမှာနည်းပါးသည်။ စောစီးစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက် ၁၁.၉%; မလုံခြုံသောလိင်၊ ၁၈.၁%၊ ပျမ်းမျှတစ်သက်တာလိင်ကြင်ဖော်ဖက်များအကြောင်း 32.7. ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူ (၃) ခုအနက် (၂) ခုတွင်ကျား၊ မကွဲပြားမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယောက်ျားများသည်ထိုအပြုအမူများတွင်ပါ ၀ င်ရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ထို့အပြင်သိသိသာသာ t-စမ်းသပ်မှုရလဒ် (t = -3.87; p <.01) တွင်ယောက်ျားများသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်မိန်းကလေးများထက်လိင်ကြင်ဖော်ဖက်များပိုမိုများပြားသည် (M = 1.99) ရှိသည်။ တွေ့နိုင်သည်မှာ SEM ပုံစံသည်ရုပ်ပြစာအုပ်များ (၃၂.၇%) ဖြစ်ပြီးနောက်တွင်ရုပ်ရှင် (၂၂.၇%) ဖြစ်သည်။ အံ့သြစရာမှာဆယ်ကျော်သက်များ၏ ၁၈.၅ ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင် SEM ကိုကြည့်ရှုရန်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုကြသည်။ အပိုဆန်းစစ်လေ့လာချက်များအရ SEM အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီကိုယောက်ျားလေးများသည်မိန်းကလေးများထက်ပိုမိုများပြားစွာအသုံးပြုခဲ့ကြပြီး၊ ခြွင်းချက်တစ်ခုအနေဖြင့် - မိန်းကလေးများ (၂၂.၅%) သည်ယောက်ျားများထက် (၁၃.၇%) သည်ဝတ္ထုများနှင့်ပိုမိုထိတွေ့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အဆိုပါ t-စမ်းသပ်မှုရလဒ် (t = -7.2; p <.01) အထီးမြီးကောင်ပေါက်ပျမ်းမျှအားဖြင့်အမျိုးသမီးမြီးကောင်ပေါက်ထက်ပျမ်းမျှအားဖြင့် SEM အမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုကြောင်းညွှန်ပြ။
တစ် ဦး ကတသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက် (ကြည့်ပါ သင်္ဘောသဖန်း 1A နှင့် 1B) အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင် SEM ထိတွေ့မှုသည်ဆယ်ကျော်သက်နှောင်းပိုင်းတွင်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်များစွာဆက်စပ်မှုရှိသည် (အသေးစိတ်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်) S2 နောက်ဆက်တွဲ) ။ အထူးသ၌ သင်္ဘောသဖန်း 1A နှင့် 1B, 2SLS ခန့်မှန်းချက်၏ရလဒ်များသည်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင် SEM နှင့်ထိတွေ့သောဆယ်ကျော်သက်များသည် ၃၁.၇% နှင့် ၂၇.၄% သည်အသက် ၁၇ နှစ်မတိုင်မီလိင်အပြုအမူ၌ပါ ၀ င်မှုနှင့်အန္တရာယ်ကင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုပြုနိုင်ခြေရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ထို့အပြင်ထိုလူငယ်များသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်အသက် ၂၄ နှစ်တွင်လိင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သုံး ဦး သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသည်။ ၂SLS မော်ဒယ်များမှခန့်မှန်းထားသောသက်ရောက်မှုများသည် OLS ခန့်မှန်းချက်များထက် ၂.၈ မှ ၅.၇ ဆပိုများသည်။
ပုံ 1. OLS နှင့် 2SLS ရလဒ်များမှအဓိကသက်ရောက်မှုများ။
(က) စောစီးစွာလိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်မလုံခြုံသောလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့် OLS နှင့် 2SLS နှစ်မျိုးလုံးအတွက် SEM ထိတွေ့မှုမှလိင်ဆက်ဆံသူအရေအတွက်တိုးလာခြင်း (ခ) အစောပိုင်းလိင်ဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်နှင့်အန္တရာယ်မကင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုအလားအလာတိုးများလာခြင်း၊ OLS နှင့် 2SLS ရလဒ်များအတွက် SEM နှင့်ထပ်မံထိတွေ့မှုအတွက်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်။
မှာပြထားတဲ့အတိုင်း စားပွဲတင် 3SEM ထိတွေ့မှု၏အန္တရာယ်များသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ်တွင်လည်းသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ ဆယ်ကျော်သက်များသည် ၁၂.၃% နှင့် ၁၀.၈% သည်အစောပိုင်းလိင်ဆက်ဆံမှုပြုခြင်းနှင့် SEM ကိုမကြည့်သောသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် SEM ပုံစံတစ်မျိုး (သို့) တစ်ခုထက် ပို၍ ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်အစောပိုင်းလိင်ဆက်ဆံမှုပြုခြင်းနှင့်မလုံခြုံသောလိင်ဆက်ဆံမှုတွင်ပါ ၀ င်နိုင်ခြေပိုများသည်။ ပို၍ စိုးရိမ်စရာမှာအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ပုံစံအမျိုးမျိုးသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်နှောင်းပိုင်းတွင်နောက်ထပ်လိင်ကြင်ဖော်ဖက်ကို ဦး ဆောင်စေခြင်းဖြစ်သည်။ SEM ၏ Multi- ပုံစံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်ထပ်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါသည် သင်္ဘောသဖန်း2ကျွန်ုပ်တို့သည်အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အန္တရာယ်ကင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံဖက်စုံများ (အနီးဆုံးကိန်းသို့) တွင်ပါဝင်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေအမျိုးမျိုးကို (ဆိုလိုသည်)၊ ၂ (၁) တွင်တင်ပြသည်။ SD),4(2 SD) နှင့်6(အမြင့်ဆုံး) ပုံစံများ။ ဂရပ်ဖစ်မှကြည့်လျှင်ပိုမိုထိတွေ့မှုသည်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ပိုမိုထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းရှင်းလင်းစွာပြသသည်။ အဆိုပါခြားနားချက်ယုတ် (1 ပုံစံ) နှင့်အစွန်းရောက် (6 ပုံစံများ) အကြားအသံထွက်ခဲ့သည်။ 2SLS ခန့်မှန်းမှုများသည် OLS ထက် ၂.၃ မှ ၃.၄ ဆပိုကြီးသည်။ အထက်ပါမှရလဒ်များသည် SEM ထိတွေ့မှုသည်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည့်ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်ကိုက်ညီခဲ့သည်။20, 41-43, 56-57].
ပုံ ၂။ အန္တရာယ်များသည့်လိင်ဆိုင်ရာအမူအကျင့်များနှင့်လိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ်ဘက်စုံပုံစံဖြင့်ထိတွေ့ခြင်း၏သက်ရောက်မှုများ။
ဇယား ၃။ လိင်မှုဆိုင်ရာရလဒ်များအပေါ်ဘက်စုံသုံး SEM ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။
SEM ထိတွေ့မှုသည်နောက်ပိုင်းတွင်စွန့်စားရသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်များစွာဆက်စပ်မှုရှိသော်လည်းခန့်မှန်းချေသက်ရောက်မှုများသည်ပျမ်းမျှကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုထက်ဒေသတွင်းပျမ်းမျှအားဖြင့်ကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှု (LATE) ကိုကန့်သတ်နိုင်သည်။111], ခန့်မှန်းကုသမှုသက်ရောက်မှုလက်ရှိစာရင်းအင်းနည်းလမ်းကိုအသုံးပြု။ compliers (ဆိုလိုသည်မှာလည်း SEM ကိုလောင်သောအစောပိုင်းရင့်ကျက်), သာသင်တန်းသားများကိုမသာလျှောက်ထားလိမ့်မယ်လို့ပေးထားသည်။ ဤပြissueနာကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်ပုံစံများကိုကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပါ ၀ င်သူအားလုံး (ဥပမာ dichotomized ရလဒ်များနှင့်အတူအမြဲတမ်းထိတွေ့နိုင်သော variable အတွက် bivariate Probit model) အသုံးပြုရန်အတွက်ပုံစံကိုပြenfor္ဌာန်းခြင်းဖြင့်ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ မှာပြထားတဲ့အတိုင်း စားပွဲတင် 4ရလဒ်များအရ SEM ထိတွေ့မှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ်သက်ရောက်မှုအားလုံးသည်အနည်းငယ်လျော့နည်းသော်လည်းသိသာထင်ရှားနေဆဲဖြစ်သည်။
ဇယား 4. အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆက်ဆံမှုရလဒ်များအပေါ် SEM ၏သက်ရောက်မှုများအတွက် nonlinear ဖွဲ့စည်းပုံခန့်မှန်းချက်1.
အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအတည်ပြုပြီးနောက်၊ ဤလေ့လာမှုသည်ကျား၊ ရလဒ်များမှာ ဦး တည်ချက်တူညီနေသော်လည်းကျား၊ မအုပ်စုနှစ်ခုလုံးအတွက်ပမာဏသည်နိမ့်သည်။ ယောက်ျားလေးများအတွက်ရလဒ်မှာတူညီသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ SEM ကိုစောစီးစွာထိတွေ့ခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများနှင့်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်မှုပိုမိုများပြားလေလေ၊ သူတို့သည်စောစောစီးစီးလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပိုမိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်နိုင်လေလေဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာအစောပိုင်းလိင်ဆက်ဆံမှုမှလွဲပြီးအခြားအရာများသည်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်။ တနည်းအားဖြင့် SEM ကိုစောစီးစွာထိတွေ့ခြင်းနှင့် SEM ၏ပုံစံများကိုပိုမိုထိတွေ့ခြင်းသည်ထိုင်ဝမ်မြောက်ပိုင်းရှိမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မိန်းကလေးများအတွက်အစောပိုင်းလိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေသည်။ သို့သော်၊ သက်ရောက်မှုအားလုံးသည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တွင်ရှိနေသေးသည် (အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ) ကိုအမြဲသတိရရမည်။ နမူနာအရွယ်အစားကိုလျှော့ချ။ ပမာဏအားလျော့ချရန်မျှော်လင့်ခဲ့သည် S3 နောက်ဆက်တွဲ).
လေ့လာမှုတော်တော်များများမှာ SEM ကိုစောစီးစွာထိတွေ့ခြင်းကလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်ဟုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (ဥပမာမလိုချင်သောကိုယ်ဝန်နှင့် STIs) နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (ဥပမာစိတ်ကျရောဂါ) ပြproblemsနာများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ထို့အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် SEM ထိတွေ့မှုအပါအ ၀ င်လိင်နှင့်ဆိုင်သောပြissuesနာများသည်ယဉ်ကျေးမှုအလိုက်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဤအရပ်မှပိုမိုရှေးရိုးစွဲယဉ်ကျေးမှု၌ထိုကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေးကိုနားလည်သဘောပေါက်ဒီဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်အာရှနိုင်ငံများစွာ၌ STIs နှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းများမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။53, 66-67] နှင့်ကမ္ဘာ့ဆယ်ကျော်သက်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ WHO ၏ခေါ်ဆိုမှု  ဆက်ဆံရေးကိုနားလည်ခြင်းသည်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာဗျူဟာများအပေါ်အလင်းဖြာနိုင်သည်။ ဤအရေးကြီးသောထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများသည်ယခင်လေ့လာမှုများ၏အခြားအကန့်အသတ်များ (ဥပမာ SEM ၏တိုင်းတာမှုအတိုင်းအတာနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်အတိုင်းအတာများကန့်သတ်ချက်များ) သည် SEM ထိတွေ့မှုနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအားနောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ SEM ထိတွေ့မှုနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုအတွက်ပိုမိုအားကောင်းသည့်အမှုတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်အဓိကအန္တရာယ်များသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူသုံးမျိုးအပေါ် SEM ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဤလေ့လာမှုကိုလည်း non- အနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း၌ဤဆက်ဆံရေးကိုလေ့လာခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှုရဲ့ရလဒ်တွေဟာ SEM ထိတွေ့မှုရဲ့အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူ (အနည်းဆုံးလိုက်နာသူများအတွက်) ကဲ့သို့သောကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မှုကိုဖော်ထုတ်သည့် IV ခန့်မှန်းမှုပုံစံပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအစောပိုင်းရင့်ကျက်သောအရွယ်ရောက်သူများသည် SEM နှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အန္တရာယ်များသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းက SEM ၏အစောပိုင်းထိတွေ့မှုကို (၈th အဆင့်) သည်လူကြီးဘဝတွင်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်သည်။ အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်၊ အန္တရာယ်မကင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်တစ်သက်တာလိင်ကြင်ဖော်ဘက်များအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ မချိန်ညှိထားသောပုံစံ (ဥပမာ - ပုံမှန်ဆုတ်ယုတ်မှုပုံစံ) နှင့် 2SLS ဆုတ်ယုတ်မှုနှစ်ခုစလုံးသည်နောက်ပိုင်းတွင်အန္တရာယ်များသည့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ် SEM ၏အစောပိုင်းထိတွေ့မှု၏သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုများကိုပြသနိုင်သော်လည်း၊ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များသည်ယခင်လေ့လာမှုများမှပဲ့တင်ထပ်ရုံသာမကဤဆက်နွယ်မှုသည်ထိရောက်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤရလဒ်များကိုသီအိုရီအမြင်နှစ်ခုမှနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ ပထမ ဦး စွာလူမှုရေးသင်ယူမှုသီအိုရီ  အပြုအမူကိုတိုက်ရိုက်အတွေ့အကြုံ၊ အခြားသူများအားစောင့်ကြည့်ခြင်းမှ (ဥပမာ - မော်ဒယ်လ်) နှင့်ရှုပ်ထွေးသောသိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများ (ဥပမာ - သတင်းအချက်အလက်များကိုသိုလှောင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း) မှတစ်ဆင့်သင်ယူသည်ဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်များသည် SEM တွင်အပြုအမူကို“ လေ့လာ” ပြီးမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုလေ့လာကြသည်။ ၎င်းတို့သည် SEM (ဥပမာအပြုအမူ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သို့မဟုတ်အကျိုးဆက်များ) မှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်၊ သို့ဖြင့်သူတို့၏လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူများကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် Wright ၏ဝယ်ယူခြင်း၊ activation နှင့် application (AAA) မော်ဒယ်လ်။114] ဆယ်ကျော်သက်များသည်ဤသုံးဆ -A လုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့်လိင်အက္ခရာများကိုလေ့လာသင်ယူကြောင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်မီဒီယာများမှ scripts များကိုလေ့လာခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းတို့ဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ အလားတူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်လေ့လာပြီးသော script များ (“ activation”) ကိုပိုမိုပေါ်လွင်စေသည်။ scripted အပြုအမူ၏အကျိုးဆက်များကိုမီဒီယာများကအပျက်သဘောထက်ပိုပြီးအကောင်းမြင်သည်ဟုရှုမြင်သောအခါ၊ တစ် ဦး ချင်းစီသည်ဇာတ်ညွှန်းကိုအသုံးပြုရန်ပိုများသည်။
အထွေထွေထိတွေ့မှု (ဥပမာ၊ viewer vs. မဟုတ်) အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် SEM အသုံးပြုမှုပုံစံအမျိုးမျိုးကိုထပ်မံစဉ်းစားခဲ့သည်။31] SEM အသုံးပြုမှု၏ထိုကဲ့သို့သောအတိုင်းအတာအရေးကြီးသည်ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များအရအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင် SEM အသုံးပြုမှုပုံစံသည်အန္တရာယ်များသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်များစွာဆက်စပ်မှုရှိသည်။ တနည်းအားဖြင့် SEM တစ်ခုနှင့်ပိုမိုထိတွေ့ခြင်းသည်ပိုမိုကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝတွင်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများပိုမိုလုပ်ဆောင်လာနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရလာဒ်များသည်လူမှုလေ့လာမှုသီအိုရီနှစ်ခုလုံးနှင့်လည်းကိုက်ညီသည်။113] နှင့် AAA  မော်ဒယ်လ်သည်ပိုမိုထိတွေ့မှုကလေ့လာပြီးသော scripts များနှင့် SEM တွင်အလားတူအပြုအမူများကိုဖော်ညွှန်းသည့်ပုံပေါ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သောက်သုံးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအပြုအမူအပေါ်ကြိမ်နှုန်းသို့မဟုတ်ထိတွေ့မှုပြင်းထန်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအသုံးချသော်လည်းအချို့သောယခင်ထုတ်ဝေမှုများကဤဆက်နွယ်မှုကိုအမျိုးမျိုးသောအမျိုးမျိုးသောအဆိုးမြင်ခံစားမှုများကိုစုဆောင်းသည်။115-116] ။ အထူးသဖြင့် Felitti  et al သည် ၄ ​​င်းတို့၏ရလဒ်များသည်သောက်သုံးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သည်ဟုငြင်းခုန်ခဲ့ပြီးပိုမိုကွဲပြားသောကလေးဘဝအခက်အခဲများကြုံတွေ့ရသောသူများသည်ကျန်းမာရေးအဆင့်နိမ့် (ဥပမာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနည်းပါးခြင်း) ကြောင့်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်နောက်ထပ်ဆန်းစစ်ခြင်းများ၌ပြုလုပ်ထားသည့်အလုပ်လုပ်သည့်ပုံစံများသည်မှန်ကန်သည်ဟုဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များသည်ကုသမှု (SEM ထိတွေ့မှု) နှင့်ကုသမှု (ထိတွေ့မှုမရှိခြင်း) အကြားစွန့်စားနိုင်သောလိင်အပြုအမူ၏ခြားနားမှုဖြစ်သည့် ATE နှင့်အလွန်နီးကပ်သည် လူ ဦး ရေတစ်ခုလုံးအတွင်းရှိလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီ၊ လူ ဦး ရေအနည်းငယ်သာပျမ်းမျှကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှု (ဆိုလိုသည်မှာတိုင်ကြားသူများ) သာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် SEM ကိုစောစီးစွာထိတွေ့ခြင်းသည်တစ် ဦး တစ်ယောက်၏မျိုးပွားမှုကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပြီးထိုသက်ရောက်မှုများမှာလူကြီးဘဝသို့ရောက်သွားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာသိသိသာသာခိုင်မာသော်လည်း၊ ကျားမအလိုက်ခွဲစိတ်သောအခါသက်ရောက်မှုများသည် omnibus မဟုတ်ပါ။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအများစုသည် ဦး တည်ချက်နှင့်ပမာဏအတိုင်းအတာနှင့်ဆင်တူသော်လည်းအစောပိုင်းလိင်ပွဲ ဦး ထွက်နှင့်လိင်ကြင်ဖော်ဘက်များစွာသည်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်အစောပိုင်းလိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်သာသိသာသည်။ ဤအရေးနိမ့်သောရလဒ်များမှာအာဏာမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ မိန်းကလေးများသိသိသာသာကွာခြားမှုသည်အခြားအရေးကြီးသည့်အချက်များနှင့်လည်းဆက်နွယ်နေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဘိုးဘေးလူ့အဖွဲ့အစည်း (ဥပမာတရုတ်၊ ထိုင်ဝမ်နှင့်အမေရိကန်) တို့တွင်ကျား၊ မရေးရာအဆင့်နှစ်ချက်သည်အလွန်နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် SEM နှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်သုံးနှစ်မှလေးနှစ်အကြာအစောပိုင်းလိင်ဆက်ဆံမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော်လည်းလိင်ဆိုင်ရာလိင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ (ဆိုလိုသည်မှာများစွာသောလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ) နှင့်ကာကွယ်မှုအသုံးပြုမှုကိုညှိနှိုင်းရန်စွမ်းအားမရှိခြင်းသည် SEM ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။
ရလဒ်အနေနှင့်အားသာချက်များစွာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့၏ SEM ထိတွေ့မှုနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများသည်ယခင်လေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်အရာများထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည်။ ၎င်းသည် SEM ထိတွေ့မှုနှင့်အမျိုးမျိုးသောစွန့်စားနိုင်သောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုလေ့လာရန်ဤလေ့လာမှုကိုအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ ဤသည်အစွမ်းသတ္တိကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ထိုး - တုံ့ပြန်မှုကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေးကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်၊ ၎င်းသည်စောင့်ကြည့်လေ့လာထားခြင်းမရှိသောအချက်များ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုတွက်ချက်ရန်နှင့်သင့်လျော်သောအချိန်နိုင်ရန်အတွက်အကာအကွယ်ပေးသည့်ကိရိယာအမျိုးမျိုးကိုခန့်မှန်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုအရ SEM ထိတွေ့မှုနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားထိရောက်သောဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုတင်းကျပ်သောဖြန့်ဖြူးသောယူဆချက်များ (ဥပမာ - bivariate probit model) ရှိသည့်မော်ဒယ်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ရလဒ်များကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအလားတူကောက်ချက်များရရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခန့်မှန်း LATE သည် ATE နှင့်အလွန်နီးစပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်မှုရှိသည်။ ထို့အပြင်ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းအတွေ့အကြုံများကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးမှုများစွာကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၊ ဖြစ်နိုင်သည့်ချန်လှပ်ထားသည့်အမျိုးမျိုးသောဘက်လိုက်မှုများ၏သြဇာကိုလျော့ချရန်ကျောင်း၏သက်ရောက်မှုများ။ ဤသည်ကကျွန်ုပ်တို့အားယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးတွင်မြီးကောင်ပေါက်မျိုးပွားကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအလားတူရလဒ်များကိုစစ်ဆေးရန်အခွင့်အလမ်းများပေးသည်။
လက်ရှိရလဒ်များသည်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်စွန့်စားနိုင်သောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးစွမ်းသော်လည်းအချို့အသိပေးချက်များကိုကိုင်တွယ်ရမည်။ ပထမ ဦး စွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာထိတွေ့မှုတိုင်းတာမှု၏ကြိမ်နှုန်းမပါဝင်ပါ။ ထို့အပြင်အတိုင်းအတာငြိမ်ရှိ၏ ထို့ကြောင့်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားပြောင်းလဲမှုများကိုစူးစမ်းလေ့လာ။ မရပါ။117] ။ ဒုတိယအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ SEM တိုင်းတာမှုတွင်အင်တာနက်နှင့်မသက်ဆိုင်သောမီဒီယာအများစုပါဝင်သည်။ ရလဒ်များကိုလက်ရှိခေတ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်စေနိုင်သည်။ အချို့သောအတိုင်းအတာအထိ, ဒီဒီလေ့လာမှုတစ်ခုကန့်သတ်ဖြစ်နိုင်သည်; သို့သော်ဤလေ့လာမှုကိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုမြင့်တက်လာသည့်အချိန်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် SEM ထိတွေ့မှုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာနားလည်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်သည်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်အဓိကမီဒီယာဖြစ်ပြီး SEM အကြောင်းအရာအတွက်အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သော်လည်းအစဉ်အလာမီဒီယာမှအန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် SEM ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှာအမြဲတမ်းတွေ့ရှိရသည်။20] ။ ထို့ကြောင့်၊ ဤကန့်သတ်ချက်သည်လက်ရှိလေ့လာမှုအတွက်ကြီးမားသောခြိမ်းခြောက်မှုမဟုတ်ပါ။ သို့သော်အခြေအနေသုံးခုကိုဆွေးနွေးခြင်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ ပထမအချက်အနေဖြင့် SEM ၏ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသရုပ်ဖော်မှုကိုပေးထားပြီးပိုမို“ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု” ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှရိုးရာမီဒီယာမှစွန့်စားရသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန့်မှန်းသက်ရောက်မှုများသည်မီဒီယာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလျှော့တွက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်အင်တာနက်မီဒီယာအသုံးပြုမှုသည်အမှန်တကယ်လူမှုရေးအဆက်အသွယ်ကိုလျော့နည်းစေပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အင်တာနက်နက်ရှိုင်းစွာ / ပြproblemနာရှိသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုသည်သေစေလောက်သောဆိုးကျိုးများ (ဥပမာအထီးကျန်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှု) နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။118] သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအဆင့်ကိုနိမ့်ကျစေနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အင်တာနက်ပေါ်တွင် SEM နှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်အထူးသဖြင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူများကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုကိုအလွန်အမင်းခန့်မှန်းနိုင်သည်။ တတိယအချက်အနေဖြင့်လေ့လာမှုတစ်ခုအရချိန်းတွေ့ခြင်းအပလီကေးရှင်းများသည်အက်ပလီကေးရှင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများကိုပေးသောရေရှည်အချစ်ဇာတ်လမ်းများတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမတိုးစေကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သို့သော်ဤအပလီကေးရှင်းများသည်အန္တရာယ်များသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ - သာမာန်လိင်ဆက်ဆံမှု (ဥပမာချိတ်ဆက်မှု) ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။119] ။ ဤနောက်ဆုံးမြင်ကွင်းတွင်အင်တာနက်၏အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ်သက်ရောက်မှုသည်အပြုသဘောဆောင်သော်လည်းယေဘုယျလိင်အပြုအမူအတွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ ၄ င်းတို့သည်ရှင်းလင်းချက်နှင့်ထင်မြင်ချက်အချို့သာဖြစ်သော်လည်းအနာဂတ်လေ့လာမှုများသည်ဤကိစ္စများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
ဒုတိယအချက်မှာ IV အဆင့်သည်ဒုတိယအဆင့်အမှားအသုံးအနှုန်းနှင့်ဆက်နွယ်မှုမရှိခြင်းကိုလက်တွေ့လေ့လာမှုများတွင်လုံးဝအတည်ပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်မှုက IV သည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အချို့သောလေ့လာမှုများအရအပျိုဖော်ဝင်ချိန်သည်နောက်ပိုင်းတွင်စွန့်စားနိုင်သောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မပတ်သက်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။120-121], အခြားသူများကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်ဆံရေးပြသခဲ့သည် [122-123] ။ ထို့ကြောင့်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်စွန့်စားနိုင်သောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုရှိနိုင်သည်ဟုငြင်းခုန်ကြပေမည်။ သို့သော်ယခင်လေ့လာမှုများအရအပျိုဖော်ဝင်ချိန်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အန္တရာယ်ရှိသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ (ဥပမာ - SEM ထိတွေ့မှု) ကိုဆက်စပ်သည့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအခြေခံယန္တရားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိသေးပါ။ ငယ်ရွယ်သောအရွယ်ရောက် [122,124] ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် SEM ထိတွေ့မှု၏အန္တရာယ်ရှိသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုခန့်မှန်းကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ IV များကိုယုံကြည်မှုရှိသည်။ ထို့အပြင်လက်ရှိရလဒ်များသည်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို SEM ထိတွေ့မှုမှပြသခဲ့သည်။ စားပွဲတင်2SEM ထိတွေ့မှုကိုထိန်းချုပ်သောအခါအပျိုဖော်ဝင်အချိန်ကိုက်ခြင်း၏အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အရေးမပါသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ဖြစ်သည်။ ဤရလဒ်သည်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်ကိုအန္တရာယ်ရှိသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်တိုက်ရိုက်နှင့်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟူသောစိုးရိမ်မှုကိုသက်သာစေခဲ့သည်။ တတိယအချက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်ပြောင်းလဲမှုကိုမကြာခဏသုံးလေ့ရှိသောစွန့်စားနိုင်သောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုသာကန့်သတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်သည်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူသုံးမျိုး မှလွဲ၍ အခြားအန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်သက်ဆိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ယခင်လေ့လာမှုများအရ SEM ထိတွေ့မှုသည်အခြားအန္တရာယ်များသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများသို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလိင်များကဲ့သို့သောဆက်စပ်ရလဒ်များနှင့်သိသိသာသာဆက်စပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။31] နှင့်ပေးဆောင်ရသောလိင်သို့မဟုတ်အုပ်စုလိုက်လိင်  ။ စတုတ္ထအချက်အနေဖြင့်ရလဒ်အားလုံးသည်မိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံစာတင်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ အကျိုးဆက်အားဘက်လိုက်မှုတင်ပြခြင်းသည်လက်ရှိရလာဒ်များကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ကျန်းမာရေးသုတေသီများကစောစောစီးစီးကာကွယ်ခြင်းသည်နောက်ပိုင်းရောဂါများကိုပိုမိုထိရောက်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟုမကြာခဏငြင်းခုံကြသည်။ SEM ထိတွေ့မှုနှင့်လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်တွေ့ရသောအန္တရာယ်များသည့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားခိုင်မာသောဆက်နွယ်မှုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် SEM ထိတွေ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများကိုငယ်ရွယ်စဉ်၊ ဤအကြံပြုချက်ကိုအမေရိကန်ကလေးအထူးကုအကယ်ဒမီမှအတည်ပြုသည်။ အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သည်လိင်မှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများစတင်ရန်အချိန်ကာလဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။126] ။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနည်းဗျူဟာတစ်ခုမှာဆယ်ကျော်သက်များ၏စာတတ်မြောက်မှု (မီဒီယာတွင်ဖော်ပြထားသောအယူအဆများနှင့်အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတ) နှင့်သဒ္ဒါဆိုင်ရာစာတတ်မြောက်မှု (ဆိုလိုသည်မှာမီဒီယာတွင်အမြင်အာရုံပါ ၀ င်မှုဖော်ပြသည့်နည်းစနစ်များဗဟုသုတ) ကိုမွေးမြူရန်ဖြစ်သည်။ ထောင့်နှင့်ချဲ့အဖြစ်)  ။ အကြောင်းအရာစာတတ်မြောက်ရေးကိုသင်ကြားရန်အတွက်အရာရှိများ (ဥပမာကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့်ကျောင်းဆရာများ) နှင့်မိဘများကဆယ်ကျော်သက်များအားလိင်နှင့်ပတ်သက်သောသင့်လျော်သောသတင်းအချက်အလက် (ဥပမာ - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်လျှော့ချရန်နည်းလမ်းများ) ကိုအစပြုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းများပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်မိဘများနှင့်ကျောင်းမှတာဝန်ရှိသူများသည်ကလေးများအား SEM ရှိ script များကို decipher လုပ်ရန်နှင့်မှန်ကန်သော scripts များ (ဥပမာ - အန္တရာယ်ကင်းသောသို့မဟုတ်ကျပန်းလိင်ဆက်ဆံခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ) ကိုဖြန့်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ မကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုကမီဒီယာစာတတ်မြောက်မှုကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုသည်အန္တရာယ်ရှိသောဆယ်ကျော်သက်များ၏အပြုအမူအပေါ်မီဒီယာများ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကာကွယ်ရန်ထိရောက်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။127] ။ ထို့အပြင်ကြိုတင်ကာကွယ်မှု (ဥပမာ - စွန့်စားမှုမှရှောင်ရှားခြင်း) နှင့်အကာအကွယ်အပြုအမူများ (ဥပမာ - STIs ကာကွယ်မှု) စသည့်အပြုသဘောဆောင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်သည့်လိင်ပညာရေးသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ တကယ်တော့လေ့လာမှုတစ်ခုအရမှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိခြင်းသည်အနာဂတ်တွင်အန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူများမှတစ် ဦး ချင်းစီ၏ကာကွယ်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်128] ။ သို့သော်ဤအကြောင်းအရာများ၏အထိခိုက်မခံသောသဘောသဘာဝအရကျောင်းအရာရှိများနှင့်မိဘများကဆယ်ကျော်သက်များ၏မီဒီယာအရေးအဖတ်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်သို့မဟုတ်လိင်နှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုမပေးအပ်မီပါတီနှစ်ခုအကြားလျှို့ဝှက်ထားရမည်။129] ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကတွေ့ရှိချက် မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမအဆင့် 2SLS ရလဒ်များသည်မိသားစုစည်းလုံးမှုသည် SEM ထိတွေ့မှုနိမ့်ကျမှုနှင့်ဆက်နွယ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်မိဘများအားနွေးထွေး။ အပြန်အလှန်ပံ့ပိုးပေးသောမိသားစုပတ် ၀ န်းကျင်ကိုတည်ဆောက်ရန်အားပေးခြင်းသည် SEM ထိတွေ့မှုကိုလျှော့ချရန်အထောက်အကူပြုသည်။
နှစ်ခုအရေးကြီးသောရလဒ်များကိုဒီလေ့လာမှုကနေပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်လိင်မှုကိစ္စရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသောမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူ (၃) ခု - အစောပိုင်းလိင်ဆက်ဆံမှု၊ မလုံခြုံသောလိင်နှင့်လိင်ကြင်ဖော်ဖက်များ - နှင့်နောက်ဆက်တွဲမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်အသင်းအနေဖြင့်လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသောမီဒီယာများ၏ပုံစံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်အသက်တာ၌အန္တရာယ်များသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေပိုမိုမြင့်မားစေခြင်းဖြစ်သည်။ အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ဆိုးကျိုးများ (ဥပမာ၊ STIs နှင့်ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိသောကိုယ်ဝန်) သည်အနောက်နှင့်အာရှလူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုလုံးအတွက်ကြီးမားသောလူမှုရေးကုန်ကျစရိတ်များရှိခြင်းကြောင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများကိုစောစီးစွာအကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်သည်။
1. Simons LG, Sutton TE, Simons RL, Gibbons FX, Murry VM ။ မိဘအုပ်ထိန်းမှုအလေ့အထကိုဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့အန္တရာယ်များတဲ့လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ယန္တရားများ - ယှဉ်ပြိုင်မှုသီအိုရီခြောက်ခုကိုစမ်းသပ်ခြင်း။ J ကိုလူငယ် Adolesc 2016 ဖေဖော်ဝါရီ; 45 (2): 255-70 ။ https://doi.org/10.1007/s10964-015-0409-7 pmid: 26718543
2. Moilanen KL, Crockett LJ, Raffaelli M က, ဂျုံးစ် BL ။ အလယ်အလတ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှအစောပိုင်းလူကြီးအထိလိင်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်၏လမ်းကြောင်းများ။ J ကို Res Adolesc 2010 မတ်လ; 20 (1): 114-39 ။ https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2009.00628.x
3. Sandfort TG, Orr M, Hirsch JS, Santelli J. လိင်ဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်အချိန်နှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်ရှည်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများ - အမေရိကန်အမျိုးသားလေ့လာမှုမှရလဒ်များ။ Am J ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး 2008 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ; 98 (1): 155-61 ။ https://doi.org/10.2105/AJPH.2006.097444 pmid: 18048793
4. ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်နွှယ်မှုဆိုင်ရာအတိုချုပ်ဆက်သွယ်မှု - ၂၀၁၅ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးချဉ်းကပ်မှုအတွက်အကြံပြုချက်များ။ ဂျီနီဗာ - ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့; ၂၀၁၅
5. et al Chandra A, Martino SC, Collins RL, Elliott MN, Berry SH, Kanouse DE ။ ရုပ်မြင်သံကြား၌လိင်ကိုကြည့်ခြင်းကဆယ်ကျော်သက်ကိုယ်ဝန်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းပါသလား။ လူငယ်တစ် ဦး အမျိုးသားရေး longitudinal စစ်တမ်းကနေတွေ့ရှိချက်။ ကလေးအထူးကု 2008 နိုဝင်ဘာ; 122 (5): 1047-54 ။ https://doi.org/10.1542/peds.2007-3066 pmid: 18977986
6. Erkut S, Grossman JM, Frye AA, Ceder I, Charmaraman L, Tracy AJ လိင်ပညာရေးကစောစီးစွာလိင်ဆက်ဆံမှုကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်သလား။ J ကိုအစောပိုင်း Adolesc 2013 မေလ; 33 (4): 482-97 ။ https://doi.org/10.1177/0272431612449386
7. Escobar-Chaves SL, Tortolero SR, Markham CM, Low BJ, Eitel P, Thickstun P. ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မီဒီယာများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ကလေးအထူးကု - အင်္ဂလိပ် Edition ကို 2005 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ; 116 (1): 303-26 ။ https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.489.7767&rep=rep1&type=pdf pmid: 16001458
8. CDC, ထိုင်ဝမ်။ ထိုင်ဝမ်အမျိုးသားကူးစက်ရောဂါစာရင်းအင်းစနစ် [အင်တာနက်] ။ https://nidss.cdc.gov.tw/en/ 10 ဇွန် 2019 ကိုးကားခဲ့သည်
9. Sawyer SM, Afifi RA, Bearinger LH, Blakemore SJ, Dick B, Ezeh AC, et al ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် - အနာဂတ်ကျန်းမာရေးအတွက်အုတ်မြစ်။ Lancet ၂၀၁၂ Aprပြီ၊ 2012 (379): 9826-1630 ။ https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60072-5 pmid: 22538178
10 ။ Lyerly je, Huber LR ။ အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၁ နှစ်အတွင်းရှိဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာမိသားစုပconflictိပက္ခ၏အခန်းကဏ္ Ann Ann Epidemiol 15 Apr; 21 (2013): 23-4 ။ https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2013.01.005 pmid: 23415277
11 ။ Simons LG, Simons RL, Lei MK, Sutton TE ။ ကြမ်းတမ်းသောမိဘအုပ်ထိန်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများရိုက်ကူးခြင်းသည်ယောက်ျားများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းအကြောင်းရှင်းပြချက်များဖြစ်သည်။ အကြမ်းဖက်ခံရသူကို ၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီ၊ 2012 (27): 3-378 ။ https://doi.org/10.1891/0886-6708.27.3.378 pmid: 22852438
12 ။ Lansford JE, Yu T, Erath SA, Pettit GS, Bates JE, Dodge KA ။ အသက် ၁၆ မှ ၂၂ နှစ်အတွင်းလိင်ကြင်ဖော်ဖက်များဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရှေ့ပြေးများ J Res Adolesc 16 Sep; 22 (2010): 20-3 ။ https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2010.00654.x pmid: 20823951
13 ။ De Graaf H, Van de Schoot R, Woertman L, Hawk ST, Meeus ဒဗလျူမိသားစုစည်းလုံးမှုနှင့်ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်ခြင်း - လှိုင်းသုံးလိုင်း longitudinal လေ့လာမှု။ J ကိုလူငယ် Adolesc 2012 မေလ; 41 (5): 583-92 ။ https://doi.org/10.1007/s10964-011-9708-9 pmid: 21853354
14 ။ Jessor R, Jessor SL ပြmနာအပြုအမူနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ နယူးယောက်: Academic Press; 1977 ။
15 ။ Bailey JA၊ Hill KG၊ Meacham MC၊ Young SE, Hawkins JD ။ ရှုပ်ထွေးသော phenotypes နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်များအားသွင်ပြင်လက္ခဏာများအတွက်မဟာဗျူဟာများ - ငယ်ရွယ်သောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဆေးရွက်ကြီးမှီခိုမှု၊ အရက်သုံးစွဲမှုရောဂါနှင့်ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်နေသောပြproblemsနာများ၏အထွေထွေနှင့်တိကျသောမိသားစုပတ် ၀ န်းကျင်ခန့်မှန်းသူများ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအရက်သေစာမှီခို 2011 ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ; 118 (2-3): 444-51 ။ https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2011.05.002 pmid: 21636226
16 ။ Choudhry V, Agardh A, Stafström M, Östergren PO ။ အရက်သုံးစွဲမှုပုံစံနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ - ယူဂန်ဒါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားကဏ္aခွဲလေ့လာမှု။ BMC ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာ၊ 2014 (14): 1 ။ https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-128 pmid: 24502331
17 ။ ကျူးလွန်မှု၏ Hirschi တီအကြောင်းရင်းများ။ ဘာကလေ - California တက္ကသိုလ်မှစာနယ်ဇင်း၊ ၁၉၆၉ ။
18 ။ Parkes A, Waylen A, Sayal K, Heron J, Henderson M, Wight D, et al ။ အလယ်တန်းကလေးဘဝတွင်မည်သည့်အပြုအမူ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကျောင်းပြproblemsနာများသည်အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သနည်း။ J ကိုလူငယ် Adolesc 2014 ;ပြီ; 43 (4): 507-27 ။ https://doi.org/10.1007/s10964-013-9973-x pmid: 23824981
19 ။ ဗန် Ryzin MJ, ဂျွန်ဆင် AB, Leve LD, Kim HK ။ လိင်ဆက်ဆံဖက်များနှင့်ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောလိင်အပြုအမူများ - အထက်တန်းကျောင်းဝင်ခွင့်မှအထက်တန်းကျောင်းထွက်ရန်ခန့်မှန်းခြင်း။ ၂၀၁၁ အောက်တိုဘာ Arch Sex Behav 2011 (40): 5-939 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-010-9649-5 pmid: 20703789
20 ။ O'Hara RE, Gibbons FX, Gerrard M, Li Z, Sargent JD ။ လူကြိုက်များသောရုပ်ရှင်များတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုပိုမိုထိတွေ့ခြင်းကအစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ပိုမိုများပြားလာခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။ Psychol သိပ္ပံ 2012 ခုနှစ်စက်တင်ဘာ; 23 (9): 984-93 ။ https://doi.org/10.1177/0956797611435529 pmid: 22810165
21 ။ Wright PJ ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှု၊ ကိုကင်းသုံးစွဲမှုနှင့်အမေရိကန်လူကြီးများကြားတွင်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလိင်ဆက်ဆံမှု။ Psychol ကိုယ်စားလှယ် ၂၀၁၂ Augဂုတ်၊ 2012 (111): 1-305 ။ https://doi.org/10.2466/18.02.13.PR0.111.4.305-310 pmid: 23045873
22 ။ Atwood KA, Kennedy SB, Shamblen S, Taylor CH, Quaqua M, Bee EM, et al ။ ပconflictိပက္ခလွန်လိုင်ဘေးရီးယားတွင်အရောင်းအ ၀ ယ်လိင်ဆက်ဆံသောဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်လျော့နည်းစေခြင်း။ အားနည်းသောကလေးငယ်များလူငယ် ၂၀၁၂ မတ်၊ 2012 (7): 1-55 ။ https://doi.org/10.1080/17450128.2011.647773 pmid: 23626654
23 ။ Strasburger VC၊ Wilson BJ, Jordan AB ။ ကလေးများ၊ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်မီဒီယာများ။ 3rd ed ။ CA: Sage၊ ၂၀၁၄
24 ။ Wright PJ, Vangeel L. ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်လိင်ကွဲပြားမှုများ - လူမှုလေ့လာမှုနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်များကိုအကဲဖြတ်ခြင်း။ Pers Individ Differ 2019 ဇွန်; 143: 128-38 ။ https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.02.019
25 ။ ပတေရုသ J ကို, Valkenburg pm တွင်။ လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်ယင်း၏အစဉ်အလာများအသုံးပြုခြင်း။ ၂၀၁၁ အောက်တိုဘာ Arch Sex Behav 2011 (40): 5-1015 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-010-9644-x pmid: 20623250
26 ။ Ybarra ML, Mitchell KJ, Hamburger M, Diener-West M, Leaf PJ X-rated ပစ္စည်းများနှင့်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်ဆိုင်ရာရန်လိုသည့်အပြုအမူများဆက်လက်ကျူးလွန်နေခြင်း - ဆက်နွယ်မှုရှိပါသလား။ ၂၀၁၁ ဇန်နဝါရီ - ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၁ Aggress Behav 2011 (37): 1-1 ။ https://doi.org/10.1002/ab.20367 pmid: 21046607
27 ။ Comstock, G, Strasburger VC ကို။ မီဒီယာအကြမ်းဖက်မှု - မေးခွန်းနှင့်အမေး Adolesc Med State Art Rev ၁၉၉၃ အောက်တိုဘာ; 1993 (4): 3-495 ။ pmid: 510
28 ။ Harkness EL, Mullan B, Blaszczynski အေ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစားသုံးသူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများအကြားဆက်စပ်မှု - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ Cyberpsychol Behav Soc Netw ၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ၊ 2015 (18): 2-59 ။ https://doi.org/10.1089/cyber.2014.0343 pmid: 25587721
29 ။ Owens EW, Behun RJ, Manning JC, Reid RC ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏ဆယ်ကျော်သက်များအပေါ်သက်ရောက်မှု - သုတေသနကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ လိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှု ၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီ၊ 2012 (19-1): 2-99 ။ https://doi.org/10.1080/10720162.2012.660431
30 ။ Willoughby BJ, Young-Petersen B, Leonhardt ND ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းလမ်းကြောင်းကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နှင့်ထွန်းသစ်စလူကြီးများမှရှာဖွေခြင်း။ J ကိုလိင် Res 2018 မတ်လ; 55 (3): 297-309 ။ https://doi.org/10.1080/00224499.2017.1368977 pmid: 28972398
31 ။ မော်ဂန် EM ။ ငယ်ရွယ်သောအရွယ်ရောက်သူများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး စားပေးမှုများ၊ အပြုအမူများနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုများ။ J ကိုလိင် Res 2011 ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ; 48 (6): 520-30 ။ https://doi.org/10.1080/00224499.2010.543960 pmid: 21259151
32 ။ Sinković M, Štulhofer A, Božić J. ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားဆက်စပ်မှုကိုလေ့လာခြင်း။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်း၏အခန်းကဏ္ role ။ J Sex Res 2013 အောက်တိုဘာ; 50 (7): 633-41 ။ https://doi.org/10.1080/00224499.2012.681403 pmid: 22853694
33 ။ Kraus SW, Russell B. အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ - intranet လက်လှမ်းမီမှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများ၏အခန်းကဏ္။ ။ CyberPsychol Behav 2008 Aprilပြီ၊ 11 (2): 162-168 ။ https://doi.org/10.1089/cpb.2007.0054 pmid: 18422408
34 ။ Bushman BJ၊ Cantor J. Media နှင့်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာမီဒီယာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ - မူဝါဒချမှတ်သူများနှင့်မိဘများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Am Psychol 2003 ဖေဖော်ဝါရီ; 58 (2): 130 ။ https://doi.org/10.1037/0003-066x.58.2.130 pmid: 12747015
35 ။ Kubicek K ကို, Beyer WJ, Weiss, G, Iverson အီး, Kipke MD ။ အမှောင်ထဲမှာ - သက်ကြီးရွယ်အိုလိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအချက်အလက်များမရှိခြင်းအားဖြင့်လိင်မှုကိစ္စစတင်ခြင်း၏လူငယ်များပုံပြင်များ။ Health Educ Behav ၂၀၁၀ Aprပြီ၊ 2010 (37): 2-243 ။ https://doi.org/10.1177/1090198109339993 pmid: 19574587
36 ။ Ybarra ML, Strasburger VC, Mitchell KJ ။ လိင်မှုကိစ္စမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့ခြင်း၊ Clin Pediatr 2014 နိုဝင်ဘာ; 53 (13): 1239-47 ။ https://doi.org/10.1177/0009922814538700 pmid: 24928575
37 ။ Kohut T, Baer JL, Watts B. ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်“ အမျိုးသမီးများကိုမုန်းရန်” လော။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာဓာတ်ပုံကြည့်ရှုသူများသည်အမေရိကန်နမူနာတွင်အသုံးပြုသူမဟုတ်သူများထက်ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာသဘောထားများပိုရှိသည်။ J ကိုလိင် Res 2016 ဇန်နဝါရီ; 53 (1): 1-1 ။ https://doi.org/10.1080/00224499.2015.1023427 pmid: 26305435
38 ။ Grudzen CR, Elliott MN, Kerndt PR, Schuster MA, Brook RH, Gelberg L. Condom အသုံးပြုခြင်းနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်များတွင်မြင့်မားသောစွန့်စားမှုဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှုများ Am J ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး 2009 Aprပြီ; 99 (1): S152-6 ။ https://doi.org/10.2105/AJPH.2007.127035 pmid: 19218178
39 ။ Sun က C, Bridges A, ဂျွန်ဆင်ဂျေအေ, Ezzell MB ။ အပြာစာပေနှင့်အထီးလိင်ဇာတ်ညွှန်း - စားသုံးမှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ 2016 မေမေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်; 45 (4): 983-94 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-014-0391-2 pmid: 25466233
40 ။ Svedin CG, ermankerman I, Priebe G. ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများမကြာခဏအသုံးပြုသူများ။ ဆွီဒင်အထီးမြီးကောင်ပေါက်များ၏တစ် ဦး ကလူ ဦး ရေကိုအခြေခံပြီးရောဂါလေ့လာမှု။ J ကို Adolesc 2011 ခုနှစ်သြဂုတ်လ; 34 (4): 779-88 ။ https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2010.04.010 pmid: 20888038
41 ။ Vandenbosch L, Eggermont S. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်ခြင်း - အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုနှင့်အပျိုဖော်ဝင်အခြေအနေ၏အလယ်အလတ်အဆင့်ကဏ္ role ။ J ကို Res Adolesc 2013 ဒီဇင်ဘာလ; 23 (4): 621-34 ။ https://doi.org/10.1111/jora.12008
42 ။ Braun-Courville DK, Rojas M. လိင်မှုဆိုင်ရာထင်ရှားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း။ J ကို Adolesc ကနျြးမာရေး 2009 သြဂုတ်; 45 (2): 156-62 ။ https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2008.12.004 pmid: 19628142
43 ။ O'Hara RE, Gibbons FX, Li Z, Gerrard M, Sargent JD ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အရက်သေစာသုံးစွဲမှုအပေါ်ရုပ်ရှင်၏အစောပိုင်းသက်ရောက်မှုများ။ Soc Sci Med 2013 နိုဝင်ဘာ; 96: 200-7 ။ https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.07.032 pmid: 24034968
44 ။ Koletić, G, Kohut T က, Štulhoferအေဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားဆက်စပ်မှု: တစ် ဦး longitudinal အကဲဖြတ်။ PloS တစ်ခုမှာ 2019 ဇွန်; 14 (6): e0218962 ။ https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218962 pmid: 31242258
45 ။ Lim က MS, Agius PA, Carrotte ER, Vella AM, Hellard ME ။ သြစတြေးလျလူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ Aust NZ J ကို Publ 2017 သြဂုတ်လကုသ; 41 (4): 438-43 ။ https://doi.org/10.1111/1753-6405.12678 pmid: 28664609
46 ။ Luder MT, Pittet I, Berchtold A, Akré C, Michaud PA, Surís JC ။ ဆယ်ကျော်သက်များအကြားအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်အပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုများ - ဒဏ္Myာရီလောသို့မဟုတ်အဖြစ်မှန်လော။ Arch Sex Behav 2011 ဖေဖော်ဝါရီ; 40 (5): 1027-35 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-010-9714-0 pmid: 21290259
47 ။ Matković T, Cohen N, Štulhoferအေ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်၎င်း၏ဆက်နွယ်မှု။ J ကို Adolesc ကနျြးမာရေး 2018 မေလ; 62 (5): 563-9 ။ https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.11.305 pmid: 29503032
48 ။ Ybarra ML, Mitchell က KJ ။ မြီးကောင်ပေါက်များကိုနိုင်ငံစစ်တမ်းတစ်ခုတွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်ပြုမူခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်မှု J ကို Adolesc ကနျြးမာရေး 2014 ဒီဇင်ဘာ; 55 (6): 757-64 ။ https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.07.012 pmid: 25266148
49 ။ Collins RL, Martino SC, Elliott MN, Miu A. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များနှင့်မီဒီယာတွင်လိင်ဆက်ဆံမှုအကြားဆက်နွယ်မှု - ခိုင်မာမှုကိုအခြေခံသည့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ Dev ကို Psychol 2011 ခုနှစ်မတ်လ; 47 (2): 585 ။ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4019965/ pmid: 24839301
50 ။ ဘရောင်း JD, သံမဏိ JR, Walsh-Childers K သည် (ed ။ ) ။ လိင်ဆယ်ကျော်သက်များ၊ လိင်မီဒီယာ - ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်အပေါ်မီဒီယာ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။ လမ်းကြောင်း ၂၀၀၁ ။
51 ။ Tolman DL, McClelland SI ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ပုံမှန်လိင်ဖွံ့ဖြိုးမှု: ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်ဆယ်စုနှစ်, 2000-2009 ။ J ကို Res Adolesc 2011 ခုနှစ်မတ်လ; 21 (1): 242-55 ။ https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2010.00726.x
52 ။ Angrist JD, Imbens GW, Rubin DB ။ ဆာပ variable တွေကိုသုံးပြီးကြောင်းကျိုးဆက်စပ်သက်ရောက်မှုများသတ်မှတ်ခြင်း။ J ကို Am Stat Assoc 1996 ဇွန်; 91 (434): 444-55 ။ https://doi.org/10.2307/2291629
53 ။ တရုတ်နိုင်ငံရှိကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြား Sun X၊ Liu X, Shi Y, Wang Y, Wang P, Chang C. အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအမူအကျင့်များနှင့်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုကိုဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ AIDS စောင့်ရှောက်မှု ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ၊ 2013 (25): 6-775 ။ https://doi.org/10.1080/09540121.2012.748875 pmid: 23252705
54 ။ Lo VH, Wei R. အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ထိုင်ဝမ်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း။ J ကိုအသံလွှင့်အီလက်ထရွန်မီဒီယာ 2005 ဇွန်; 49 (2): 221-37 ။ https://doi.org/10.1080/01614576.1987.11074908
55 ။ Kim YH ကိုရီးယားဆယ်ကျော်သက်များ၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအပြုအမူများနှင့်ရွေးချယ်ထားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆောက်လုပ်မှုများနှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေး။ J ကို Adolesc ကနျြးမာရေး 2001 အောက်တိုဘာ; 29 (4): 298-306 ။ https://doi.org/10.1016/s1054-139x(01)00218-x pmid: 11587914
56 ။ Ma CM, Shek DT ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဟောင်ကောင်ရှိအစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များအသုံးပြုခြင်း။ J ကိုကလေးအထူးကု Adolesc Gynecol 2013 ဇွန်; 26 (3): S18-25 ။ https://doi.org/10.1016/j.jpag.2013.03.011 pmid: 23683822
57 ။ Braun-Courville DK, Rojas M. လိင်မှုဆိုင်ရာထင်ရှားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း။ J ကို Adolesc ကနျြးမာရေး 2009 သြဂုတ်; 45 (2): 156-62 ။ https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2008.12.004 pmid: 19628142
58 ။ Sabina C, Wolak J, Finkelhor D. လူငယ်များအတွက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှု၏သဘောသဘာဝနှင့်ဒိုင်းနမစ်။ CyberPsychol Behav 2008 ဒီဇင်ဘာ၊ 11 (6): 691-3 ။ https://doi.org/10.1089/cpb.2007.0179 pmid: 18771400
59 ။ Häggström-Nordin E၊ Hanson U, Tydén T. ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိဆယ်ကျော်သက်များအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များအကြားဆက်စပ်မှုများ။ Int J STD အေအိုင်ဒီအက်စ် 2005 ဖေဖော်ဝါရီ; 16 (2): 102-7 ။ https://doi.org/10.1258/0956462053057512 pmid: 15807936
60 ။ Weber M, Quiring O, Daschmann G. Peers, မိဘများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ - ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ဆိုင်ရာဖော်ထုတ်ထားသည့်အကြောင်းအရာနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်မှုဆက်စပ်ပုံများကိုစူးစမ်းခြင်း။ လိင်ကိစ္စ ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ၊ 2012 (16): 4-408 ။ https://doi.org/10.1007/s12119-012-9132-7
61 ။ Rissel C၊ Richters J၊ De Visser RO၊ McKee A၊ Yeung A၊ Caruana T. သြစတြေးလျမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်း - ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဒုတိယAustralianစတြေးလျလေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များ။ J ကိုလိင် Res 2017 ဖေဖော်ဝါရီ; 54 (2): 227-40 ။ https://doi.org/10.1080/00224499.2016.1191597 pmid: 27419739
62 ။ Spriggs AL, Halpern မှန် CT လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်အချိန်ကာလနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားဖြင့်အထက်တန်းလွန်ပညာရေးစတင်ခြင်း။ Perspect Sex Reprod Health 2008 စက်တင်ဘာ၊ 40 (3): 152-61 ။ https://doi.org/10.1363/4015208 pmid: 18803797
63 ။ Buttmann N, Nielsen A, Munk C, Frederiksen K, Liaw KL, Kjaer SK ။ ပထမလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကငယ်ရွယ်သောအသက်အရွယ်နှင့်နောက်ဆက်တွဲအန္တာရာယ်ရှိသောအပြုအမူ - ယေဘုယျလူ ဦး ရေမှဒိန်းမတ်အမျိုးသား ၂၀၀၀၀ ကျော်အားရောဂါလေ့လာမှု။ Scand J ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ၂၀၁၄ သြဂုတ်၊ 20,000 (2014): 42-6 ။ https://doi.org/10.1177/1403494814538123 pmid: 24906552
64 ။ Heywood W၊ ပက်ထရစ် K၊ Smith AM, Pitts MK အစောပိုင်းပထမ ဦး ဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်လိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားရလဒ်များအကြားဆက်နွယ်မှုများ - လူ ဦး ရေအခြေပြုအချက်အလက်များကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Behav 2015 Aprပြီ Arch; 44 (3): 531-69 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-014-0374-3 pmid: 25425161
65 ။ Velezmoro R, Negy C, Livia J. အွန်လိုင်းလိင်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု - အမေရိကန်နှင့်ပီရူးကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားနိုင်ငံအဆင့်နှိုင်းယှဉ်မှု။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ 2012 (41): 4-1015 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-011-9862-x pmid: 22083655
66 ။ Yu XM၊ Guo SJ၊ Sun YY ။ တရုတ်လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်သောစွန့်စားမှုများ - meta-analysis ။ လိင်ကျန်းမာရေး ၂၀၁၃ နို ၀ င်ဘာ၊ 2013 (10): 5-424 ။ https://doi.org/10.1071/SH12140 pmid: 23962473
67 ။ Jeong S, Cha C, Lee J. STI ပညာရေး၏စမတ်ဖုန်းအသုံးချမှုကိုကိုရီးယားဆယ်ကျော်သက်များအပေါ်သက်ရောက်မှု။ ကနျြးမာရေး Educ J ကို 2017 နိုဝင်ဘာ; 76 (7): 775-86 ။ https://doi.org/10.1177/0017896917714288
68 ။ Hong JS, Voisin DR, Hahm HC, Feranil M, Mountain SA ။ တောင်ကိုရီးယားအစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများ၊ အသိပညာနှင့်အပြုအမူများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ဂေဟဗေဒမူဘောင်ကိုအသုံးပြုခြင်း။ J ကို Soc Serv Res 2016 အောက်တိုဘာ; 42 (5): 584-97 ။ https://doi.org/10.1080/01488376.2016.1202879
69 ။ James J, Ellis BJ, Schlomer GL, Garber J. အစောပိုင်းအပျိုဖော်ဝင်ခြင်း၊ လိင်ပွဲ ဦး ထွက်ခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကိုလေ့လာခြင်း။ - ဘက်ပေါင်းစုံဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် - ဖွံ့ဖြိုးမှုပုံစံ၏စမ်းသပ်မှုများ။ Dev Psychol 2012 မေလ၊ 48 (3): 687 https://doi.org/10.1037/a0026427 pmid: 22268605
70 ။ Zimmer-Gembeck MJ, Helfand M. အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်နှစ်ပေါင်းများစွာသုတေသနပြုမှု။ လိင်မှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများ၊ အသက်၊ ကျား၊ မနှင့်နောက်ခံတို့၏အရေးကြီးပုံ။ Dev Rev 2008 ဇွန်; 28 (2): 153-224 ။ https://doi.org/10.1016/j.dr.2007.06.001
71 ။ Parkes A, Wight D, Henderson M, West P. အစောပိုင်းလိင်ဆက်ဆံမှုသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ပညာရေးအတွက်ပါ ၀ င်မှုကိုလျှော့ချသလား။ SHARE longitudinal လေ့လာမှုမှအထောက်အထား။ J ကို Adolesc 2010 အောက်တိုဘာ; 33 (5): 741-54 ။ https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2009.10.006 pmid: 19897236
72 ။ Baumann P, Bélanger RE, Akre C, Suris JC ။ အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစပျိုးသူများ၏အန္တရာယ်များတိုးလာခြင်း - အချိန်သည်ကွဲပြားခြားနားစေသည်။ လိင်ကျန်းမာရေး 2011 ခုနှစ်၊ Sep; 8 (3): 431-5 ။ https://doi.org/10.1071/SH10103 pmid: 21851787
73 ။ ဂျွန်ဆင် MW, Bruner NR ။ လိင်ဆိုင်ရာလျှော့ချခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန် - အိပ်ချ်အိုင်ဗွီမှီခိုမှုတွင်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးကူးစက်မှုနှင့်နှောင့်နှေးသောလိင်ဆုလာဘ်များလျှော့ချခြင်း။ မူးယစ်ဆေးဝါးအရက်ကိုမှီခိုခြင်း ၂၀၁၂ ဇွန်၊ 2012 (123-1): 3-15 ။ https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2011.09.032 pmid: 22055012
74 ။ Regushevskaya E, Dubikaytis T, Laanpere M, Nikula M, Kuznetsova O, Karro H, et al ။ စိန့်ပီတာစဘတ်၊ အက်စ်တိုးနီးယားနှင့်ဖင်လန်နိုင်ငံများရှိမျိုးဆက်ပွားအသက်အရွယ်အမျိုးသမီးများအကြားလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများကိုဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ Int J ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာ၊ 2010 (55): 6-581 ။ https://doi.org/10.1007/s00038-010-0161-4 pmid: 20589411
75 ။ Kim HS တောင်ကိုရီးယားဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်ဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်နှင့်စိတ်ကျန်းမာရေး။ J ကိုလိင် Res 2016 မတ်လ; 53 (3): 313-320 ။ https://doi.org/10.1080/00224499.2015.1055855 pmid: 26457545
76 ။ Yeh CC ကို, Lin SH, Zhuang က YL ။ အထက်တန်းကျောင်းသားများ၏ကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများအကြားပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုအန္တရာယ်ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ ၂၁ ရာစုထိုင်ဝမ်တွင်လူ ဦး ရေတိုးတက်မှု - Trend and စိန်ခေါ်မှု၊ တိုင်ပေ၊ ထိုင်ဝမ်; ၂၀၀၅
77 ။ Ashenhurst JR, Wilhite ER, Harden KP, Fromme K. လိင်ဆက်ဆံဖက်များနှင့်ဆက်ဆံရေးအခြေအနေသည်ထွန်းသစ်စလူကြီးများမှအကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ 2017 လိင် Behav Arch လိင်; 46 (2): 419-32 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-016-0692-8 pmid: 26940966
78 ။ အသေးစိတ် LB, Philbin JM ။ ငယ်ရွယ်သောဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်ဆိုင်ရာစတင်ခြင်း၊ ကလေးအထူးကု 2013 ခုနှစ်မေလ; 131 (5): 886-91 ။ https://doi.org/10.1542/peds.2012-3495 pmid: 23545373
79 ။ Petersen AC၊ Crockett L၊ Richards M၊ Boxer အေ။ အပျိုဖော်ဝင်အခြေအနေအတွက်မိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံခြင်း - ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ တရားဝင်မှုနှင့်ကန ဦး စံနှုန်းများ။ J ကိုလူငယ် Adolesc 1988 Aprပြီ; 17 (2): 117-33 ။ https://doi.org/10.1007/BF01537962 pmid: 24277579
80 ။ Chiao C, Ksobiech K. ထိုင်ဝမ်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအကြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်သောကရောက်မှုအတွက်အစောပိုင်းလိင်ဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်နှင့်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်ကိုသြဇာသက်ရောက်ခြင်း။ Psychol ကျန်းမာရေး Med ၂၀၁၅ နို ၀ င်ဘာ၊ 2015 (20): 8-972 ။ https://doi.org/10.1080/13548506.2014.987147 pmid: 25495948
81 ။ Kogan SM, Cho J, Simons LG, Allen KA, Beach SR, Simons RL, et al ။ ကျေးလက်ဒေသရှိအာဖရိကန်အမျိုးသားလူငယ်များအကြားတွင်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်နှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ - ဘဝသမိုင်းသီအိုရီကို အခြေခံ၍ ပုံစံတစ်ခုကိုစမ်းသပ်ခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Behav 2015 Aprပြီ Arch; 44 (3): 609-18 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-014-0410-3 pmid: 25501863
82 ။ et al ဘွန်း L ကို, Clements J ကို, Bertalli N ကို, အီဗန် - Whipp T က, McMorris က BJ, Patton GC ။ ကျောင်းအခြေပြု epidemiologic စစ်တမ်းတွင် Pubertal Development Scale နှင့်လိင်ရင့်ကျက်မှုစကေးကို အသုံးပြု၍ အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ J ကို Adolesc 2006 အောက်တိုဘာ; 29 (5): 709-20 ။ https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2005.10.001 pmid: 16324738
83 ။ Dorn LD, Dahl RE, Woodward HR, Biro F. အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏နယ်နိမိတ်ကိုသတ်မှတ်ခြင်း - အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းအခြေအနေနှင့်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်ကိုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်။ Appl Dev သိပ္ပံ 2006 ဇန်နဝါရီ; 10 (1): 30-56 ။ https://doi.org/10.1207/s1532480xads1001_3
84 ။ Natsuaki MN, Klimes-Dougan B, Ge X, Shirtcliff EA, Hastings PD, Zahn-Waxler C. အစောပိုင်းအရွယ်ရောက်မှရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ပြproblemsနာများကိုပြန့်ပွားစေခြင်း။ J ကို Clin ကလေး Adolesc Psychol 2009 ဇူလိုင်; 38 (4): 513-24 ။ https://doi.org/10.1080/15374410902976320 pmid: 20183638
85 ။ Dimler LM, Natsuaki MN မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အစောပိုင်းလူကြီးများအတွက်အပြုအမူများကိုပြင်ပမှအပျိုဖော်ဝင်ချိန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - meta-analytic review J ကို Adolesc 2015 ဒီဇင်ဘာ; ၄၅: ၁၆၀-၇၀ ။ https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2015.07.021 pmid: 26439868
86 ။ Tsai MC, Strong C၊ လင်း CY ။ ထိုင်ဝမ်ရှိမကောင်းသောအပြုအမူများအပေါ်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်၏ဆိုးကျိုးများ - ၇ မှ ၁၂ တန်းအထိဆယ်ကျော်သက်များ၏ longitudinal analysis ။ J ကို Adolesc7ဇူလိုင်; 12: 2015-42 ။ https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2015.03.016 pmid: 25956430
87 ။ ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေး ၀ န်ကြီးဌာန။ ထိုင်ဝမ်လူငယ်ကျန်းမာရေးစစ်တမ်း [အင်တာနက်] ၏ ၂၀၀၆ ခုနှစ်နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာ။ https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=257&pid=65585အောက်တိုဘာလ 2019 ကိုးကားခဲ့သည်
88 ။ Petersen JL, Hyde JS ။ လိင်၌ကျား, မကွဲပြားမှုအပေါ်သုတေသန၏ meta- သရုပ်ခွဲပြန်လည်သုံးသပ်, 1993-2007 ။ Psychol Bull 2010 ဇန်နဝါရီ; 136 (1): 21 ။ https://doi.org/10.1037/a0017504 pmid: 20063924
89 ။ Santelli JS, Lowry R, ​​Brener ND, Robin L. လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေ၊ မိသားစုတည်ဆောက်ပုံနှင့်အမေရိကန်မြီးကောင်ပေါက်များအကြားလူမျိုးရေး / လူမျိုးရေးဆိုင်ရာလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများအသင်း။ Am J ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ၂၀၀၀ အောက်တိုဘာ၊ 2000 (90): 10 ။ https://doi.org/10.2105/ajph.90.10.1582 pmid: 11029992
90 ။ Weiser SD, Leiter K, Bangsberg DR, Butler LM, Percy-de Korte F, Hlanze Z, et al ။ ဘော့ဆွာနာနှင့်ဆွာဇီလန်ရှိအမျိုးသမီးများအကြားစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်ခြင်းသည်အန္တရာယ်များသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ PLoS Med 2007 အောက်တိုဘာ;4(10): e260 ။ https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0040260 pmid: 17958460
91 ။ Simons LG, Burt CH, Tambling RB ။ အန္တရာယ်ရှိလိင်အပြုအမူအပေါ်မိသားစုအချက်များ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ဖျန်ဖြေဖော်ထုတ်။ J ကကလေး Fam Stud 2013 ခုနှစ်မေလ; 22 (4): 460-70 ။ https://doi.org/10.1007/s10826-012-9598-9
92 ။ Whiteman SD, Zeiders KH, Killoren SE, Rodriguez SA, Updegraff KA ။ မက္ကဆီကန် - မူရင်းမြီးကောင်ပေါက်များ၏ဆယ်ကျော်သက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများအပေါ်မောင်နှမသြဇာလွှမ်းမိုးမှု - မောင်နှမမော်ဒယ်လ်၏အခန်းကဏ္။ ။ J ကို Adolesc ကနျြးမာရေး 2014 မေလ; 54 (5): 587-92 ။ https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2013.10.004 pmid: 24287013
93 ။ Lansford JE, Yu T, Erath SA, Pettit GS, Bates JE, Dodge KA ။ အသက် ၁၆ မှ ၂၂ နှစ်အတွင်းလိင်ကြင်ဖော်ဖက်များဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရှေ့ပြေးများ J Res Adolesc 16 Sep; 22 (2010): 20-3 ။ https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2010.00654.x pmid: 20823951
94 ။ De Graaf H, Van de Schoot R, Woertman L, Hawk ST, Meeus ဒဗလျူမိသားစုစည်းလုံးမှုနှင့်ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်ခြင်း - လှိုင်းသုံးလိုင်း longitudinal လေ့လာမှု။ J ကိုလူငယ် Adolesc 2012 မေလ; 41 (5): 583-92 ။ https://doi.org/10.1007/s10964-011-9708-9 pmid: 21853354
95 ။ Kotchick BA, Shaffer A, Miller KS, Forehand R. ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ - စနစ်ပေါင်းစုံရှုထောင့်။ Clin Psychol ဗြာ 2001 ဇွန်; 21 (4): 493-519 ။ https://doi.org/10.1016/s0272-7358(99)00070-7 pmid: 11413865
96 ။ Chiao ကို C, ရီ CC ကို။ ထိုင်ဝမ်လူငယ်များအကြားဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မတိုင်မီလက်မထပ်မီလိင်နှင့်ကျန်းမာရေးရလဒ်များ - အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်အခြေအနေအပေါ်သက်ရောက်မှုများအပေါ်အမြင်။ အေအိုင်ဒီအက်စ်ကုသမှု ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ; 2011 (23): 9-1083 ။ https://doi.org/10.1080/09540121.2011.555737 pmid: 21562995
97 ။ Schuster RM, Mermelstein R, Wakschlag L. စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ၊ ဆေးခြောက်သုံးခြင်း၊ J ကိုလူငယ် Adolesc 2013 သြဂုတ်; 42 (8): 1194-209 ။ https://doi.org/10.1007/s10964-012-9809-0 pmid: 22927009
98 ။ Bailey JA, Haggerty KP, White HR, Catalano RF ။ အထက်တန်းကျောင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းပြောင်းလဲနေသောဖွံ့ဖြိုးမှုအခြေအနေနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုများ။ ၂၀၁၁ အောက်တိုဘာ Arch Sex Behav 2011 (40): 5-951 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-010-9633-0 pmid: 20571863
99 ။ Oliveria-Campos M၊ Giatti L၊ Malta D, Barreto S. ဘရာဇီးဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်နွှယ်သောအချက်များ။ အမ်း Epidemiol 2013 အောက်တိုဘာ; 23 (10): 629-635 ။ https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2013.03.009 pmid: 23622957
100 ။ Akers RL ။ လူမှုသင်ယူမှုနှင့်လူမှုရေးတည်ဆောက်ပုံ - ရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်ဆုတ်ယုတ်ခြင်း၏အထွေထွေသီအိုရီ။ ဘော်စတွန် - အနောက်မြောက်တက္ကသိုလ်မှစာနယ်ဇင်း၊ 1998 ။
101 ။ Derogatis LR ။ SCL-90-R: အုပ်ချုပ်ရေး၊ ရမှတ်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလက်စွဲ - ၂ ။ 2nd ed ။ Towson, MD: Leonard R. Derogatis; 1983 ။
102 ။ မှီခို variable ကိုတစ် ဦး dichotomy အခါ Hellevik O. Linear နှိုင်းယှဉ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆုတ်ယုတ်။ Qual Quant 2009 ဇန်နဝါရီ; 43 (1): 59-74 ။ https://doi.org/10.1007/s11135-007-9077-3
103 ။ Cawley J, Meyerhoefer C. အဝလွန်ခြင်း၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကုန်ကျစရိတ်: တစ်ခုနျဆာပ variable တွေကိုချဉ်းကပ်။ J ကိုကျန်းမာရေး Econ 2012 ဇန်နဝါရီ; 31 (1): 219-30 ။ https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2011.10.003 pmid: 22094013
104 ။ Luder MT, Pittet I, Berchtold A, Akré C, Michaud PA, Surís JC ။ ဆယ်ကျော်သက်များအကြားအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်အပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုများ - ဒဏ္Myာရီလောသို့မဟုတ်အဖြစ်မှန်လော။ ၂၀၁၁ အောက်တိုဘာ Arch Sex Behav 2011 (40): 5-1027 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-010-9714-0 pmid: 21290259
105 ။ မက္ကီအေ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်လူငယ်များကိုအန္တရာယ်ပြုသလား။ Aust J ကို Commun ၂၀၁၀ ဇန်နဝါရီ၊ 2010 (37): 1-17 ။ မှရနိုင်သည် http://eprints.qut.edu.au/41858/
106 ။ Stock JH, Wright JH, Yogo M. အားနည်းသောကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့်ယေဘူယျအားဖြင့်အခိုက်အတန့်အားဖြင့်ဖော်ထုတ်နိုင်မှုအားနည်းခြင်း။ J ကိုဘတ်စ်ကား Econ Stat 2002 အောက်တိုဘာလ; 20 (4): 518-29 ။ https://doi.org/10.1198/073500102288618658
107 ။ အဲလစ် BJ ။ မိန်းကလေးများအတွက်အပျိုဖော်ဝင်ရင့်ကျက်မှု၏အချိန်ကာလ - ပေါင်းစည်းသည့်ဘဝသမိုင်းကြောင်း Psychol Bull 2004 နိုဝင်ဘာ; 130 (6): 920 ။ https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.6.920 pmid: 15535743
108 ။ ရိုဝီဒီစီ။ ပထမ ဦး ဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုတွင်မီးယပ်စချိန်နှင့်အသက်အရွယ်၌မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုတွင် - Belsky-Draper ယူဆချက်ကိုဝေဖန်ခြင်း။ Evol Hum Behav 2002 စက်တင်ဘာ; 23 (5): 365-72 ။ https://doi.org/10.1016/S1090-5138(02)00102-2
109 ။ Kaprio J, Rimpelä A, Winter T, Viken RJ, Rimpelä M, Rose RJ ။ မီးယပ်စချိန်ရှိ BMI နှင့်အသက်အရွယ်အပေါ်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုများ။ Hum Biol 1995 အောက်တိုဘာ: 739-53 ။ pmid: 8543288
110 ။ Hansen LP ။ အချိန်လေးခန့်မှန်းချက်၏ယေဘူယျနည်းလမ်း၏ကြီးမားသောနမူနာဂုဏ်သတ္တိများ။ Econometrica: ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်၊ http://www.emh.org/Hans1982.pdf
111 ။ Angrist J, Imbens G. ဒေသတွင်းပျမ်းမျှကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းခြင်း။ Econometrica ၁၉၉၅; 1995: 62-467 ။ https://doi.org/10.3386/t0118
112 ။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့။ လိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး [အင်တာနက်] ။ https://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescence/en/5အောက်တိုဘာလ 2019 ကိုးကားခဲ့သည်။
113 ။ Bandura A. အတွေးနှင့်အပြုအမူ၏လူမှုအခြေခံများ။ Englewood ကမ်းပါး, NJ: Prentice ခန်းမ; 1986 ။
114 ။ Wright PJ ။ ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မှုအတွက်ပြောဆိုချက်ကိုအကဲဖြတ်သည့်လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်မီဒီယာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ အမ်း Int Commun Assoc ။ 2011 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ; 35 (1): 343-85 ။ https://doi.org/10.1080/23808985.2011.11679121
115 ။ Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, Williamson DF, Spitz AM, Edwards V, et al ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်သေဆုံးရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းများနှင့်ကလေးဘ ၀ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်အိမ်တွင်းအလုပ်မလုပ်မှုဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှု - ဆိုးရွားသည့်ကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများ (ACE) လေ့လာမှု။ Am J ကို Prev Med 1998 မေလ; 14 (4): 245-58 ။ https://doi.org/10.1016/S0749-3797(98)00017-8 pmid: 9635069
116 ။ Kim SS၊ Jang H၊ Chang HY၊ Park YS၊ Lee DW ။ တောင်ကိုရီးယားရှိကလေးဘဝအခက်အခဲများနှင့်လူကြီးစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများအကြားဆက်စပ်မှု - တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ကိုယ်စားပြုသော longitudinal လေ့လာမှုမှရလဒ်များ။ BMJ Open 2013; 3: e002680 ။ http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2013-002680 pmid: 23878171
117 ။ Willoughby BJ, Young-Petersen B, Leonhardt ND ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းလမ်းကြောင်းကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နှင့်ထွန်းသစ်စလူကြီးများမှရှာဖွေခြင်း။ J ကိုလိင် Res 2018 မတ်လ; 55 (3): 297-309 ။ https://doi.org/10.1080/00224499.2017.1368977 pmid: 28972398
118 ။ Tokunaga RS ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုပြသနာများနှင့်အင်တာနက်အလေ့အထများအကြားဆက်နွယ်မှုကို meta-analysis သည် - အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုဖန်တီးခြင်း၊ ပြinternetနာရှိသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြregulation္ဌာန်းခွင့်သုတေသနမရှိခြင်း။ Commun Monogr 2017 ဇွန်; 84 (4): 423-446 ။ https://doi.org/10.1080/03637751.2017.1332419
119 ။ အတ္တလန္တိတ်။ လူငယ်များအဘယ်ကြောင့်ဤမျှနည်းပါးသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံနေကြသနည်း အင်တာနက်။ https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/12/the-sex-recession/573949/5အောက်တိုဘာလ 2019 ကိုးကားခဲ့သည်။
120 ။ Ostovich JM, Sabini ဂျေအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချိန်ကာလ။ Arch လိင် Behav 2005 Aprပြီ; 34 (2): 197-206 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-005-1797-7 pmid: 15803253
121 ။ Siebenbruner J, Zimmer ‐ Gembeck MJ, Egeland B. လိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်သန္ဓေတားနည်းကိုအသုံးပြုခြင်း - ရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသည့်အပြုအမူများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသော ၁၆ နှစ်တာလေ့လာမှုတစ်ခု။ J ကို Res Adolesc 16 မတ်လ; 2007 (17): 1-179 ။ https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2007.00518.x
122 ။ Copeland W, Shanahan L, Miller S, Costello EJ, Angold A, Maughan B. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မိန်းကလေးများအပေါ်အစောပိုင်းအပျိုဖော်ဝင်ချိန်၏ဆိုးကျိုးများသည်လူကြီးဘဝသို့ဆက်လက်ကူးစက်သွားသလား။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု, 2010 အောက်တိုဘာ; 167 (10): 1218 ။ https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2010.09081190
123 ။ Moore SR, Harden KP, Mendle J. Pubertal အချိန်နှင့်မိန်းကလေးငယ်များတွင်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ။ Dev Psychol 2014 ဇွန်; 50 (6): 1734 ။ https://doi.org/10.1037/a0036027 pmid: 24588522
124 ။ Weichold K, Silbereisen RK, Schmitt-Rodermund E, ဆယ်ကျော်သက်များတွင်နှောင်းပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်စောစောစီးစီး၏ရေတိုနှင့်ရေရှည်အကျိုးဆက်များ။ ခုနှစ်တွင်: Hayward C. , အယ်ဒီတာ။ အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းတွင်ကျား၊ မကွဲပြားမှုများ နယူးယောက်၊ နယူးယော့ခ်။ 2003 စစ။ 241-76 ။
125 ။ Hald GM, Kuyper L, Adam PC, Wit JB ။ ကြည့်ရှုခြင်းကဘာတွေလုပ်နေသလဲ။ ဒတ်ခ်ျဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များနှင့်လူငယ်လူရွယ်များ၏နမူနာတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်း။ J Sex Med ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာ၊ 2013 (10), 12-2986 ။ https://doi.org/10.1111/jsm.12157 pmid: 23621804
126 ။ Hagan JF၊ Shaw JS, Duncan PM (ed ။ ) ။ တောက်ပသောအနာဂတ် - မွေးကင်းစ၊ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုလမ်းညွှန်။ အမေရိကန်ကလေးအထူးကုအကယ်ဒမီ၊ 2007 ။
127 ။ Jeong SH, Cho H, Hwang Y. မီဒီယာစာတတ်မြောက်ရေးဆောင်ရွက်ချက်များ။ meta-analytic review J ကို Commun, 2012 Aprပြီ; 62 (3): 454-72 ။ https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2012.01643.x pmid: 22736807
128 ။ Fedor TM, Kohler HP၊ Behrman JR ။ မာလာဝီတွင်အိမ်ထောင်ကျသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု - ကွာရှင်းခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံသူအရေအတွက်နှင့်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း။ လူ ဦး ရေစာရင်း ၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ၊ 2015 (52): 1-259 ။ https://doi.org/10.1007/s13524-014-0364-z pmid: 25582891
129 ။ အလက်ဇန်းဒါး SC, Fortenberry JD, Pollak KI, Bravender T, Davis JK, bystbye T, et al ။ ဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလာရောက်လည်ပတ်စဉ်အတွင်းလိင်အကြောင်းပြောဆိုခြင်း JAMA ကလေးအထူးကု 2014 ဖေဖော်ဝါရီ; 168 (2): 163-9 ။ https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2013.4338 pmid: 24378686